PEACEFUL PA: May 2015
I.Q Test Questions for children ညဏ်စမ်းမေးခွန်းများ
၁။ နွားနို့နဲ့ မလိုင် ဘယ်ဟာက ပိုလေးပါသလဲ?
၂။ ရွှေ တပိသာနဲ့ ငှက်မွေး တပိသာ ဘယ်ဟာက ပိုလေးပါသလဲ?
၃။ လယ်သမားတယောက်မှာ သိုး ၁၇ ကောင်ရှိပါတယ်။ ၉ ကောင်က လွဲလို့ အကုန်သေရင်၊ သိုး ဘယ်နှစ်ကောင် ကျန်သလဲ?
၄။ လျှပ်စစ်ရထားတစင်းဟာ တောင်ဖက်ကို သွားနေတယ်။ လေက မြောက်ဖက်ကို တိုက်နေတယ်။ မီးခိုး ဘယ်ဖက်ကို သွားမလဲ?
၅။ ဧဝရက်တောင်ကို လူတွေ မတွေ့ခင်မှာ ကမ္ဘာအမြင့်ဆုံးတောင်ဟာ ဘယ်တောင်ပါလဲ?
၆။ မြန်မာစာမှာ စာလုံးတစု ရှိပါတယ်။ ဘယ်သူပဲ ရေးရေး၊ ဘယ်လောက်ပဲ ကြိုးစားရေးရေး၊ စာလုံးပေါင်းက မှားနေတယ်။ အဲဒါ ဘယ်စာလုံးများ ဖြစ်မလဲ?
၇။ အစီအစဉ်အတိုင်း ရေးထားတာဆိုရင်၊ 9, 16, 25, 36, _ _ ရဲ့ နောက်ဆုံးကဏန်းက ဘာဖြစ်မလဲ?
၈။ ခွေးတကောင်မှာ သူ့အမြီးကို ခြေထောက်လို့ အမည်ပြောင်း ခေါ်လိုက်ကြရင်၊ အဲဒီခွေးမှာ ခြေထောက် ဘယ်နှစ်ချောင်း ရှိမလဲ?
၉။ ၁ နဲ့ ၁၀၀ ကြားမှာ ၉ အလုံးပေါင်း ဘယ်နှစ်လုံး ရှိသလဲ?
၁၀။ စားသောက်ပွဲတခုမှာ လူ ၁၀ ယောက် တယောက်နဲ့ တယောက် အပြန်အလှန် လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ကြရင်၊ လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်တဲ့ အကြိမ်ပေါင်း ဘယ်လောက်ရှိမလဲ?
၁။ နွားနို့ ၂။ အတူတူပါ။ ၃။ ၉ ကောင် ၄။ လျှပ်စစ်ရထားမှာ မီးခိုး မထွက်ပါ။
၅။ ဧဝရက်တောင် ၆။ မှားနေတယ် ၇။ 49 ၈။ ၄ ချောင်း ၉။ 20 ၁၀။ 45
Labels: I.Q Test, ဟာသ
သမ္မာကျမ်းစာနဲ့ ယုံကြည်ချက်ဆိုင်ရာ ခရစ်ယာန် အသုံးအနှုန်းတွေကို media တွေမှာ လွဲမှားစွာ သုံးနှုန်းတာတွေ တွေ့နေရပါတယ်။ စကားလုံးတွေကလည်း လူမှုရေးမှာ တမျိုး၊ နိုင်ငံရေးမှာ တမျိုး၊ ဘာသာရေးမှာ တမျိုး အဓိပ္ပါယ်မတူဘဲ ပြောင်းသွားတတ်ပါတယ်။ အခု ဖေါ်ပြမယ့် စကားလုံးတွေကို အက္ခရာစဉ်အတိုင်း မသွားဘဲ၊ အဓိပ္ပါယ်နီးစပ်ရာအတိုင်း ဖေါ်ပြသွားပါမယ်။
A'THEIST, n. [Gr. ofapriv. and God.] ဘုရားမဲ့
One who disbelieves the existence ofaGod, or Supreme intelligent Being. ဘုရားရှိတယ်လို့ မယုံသူ။
သူဟာ "theist" လို့ ခေါ်တဲ့ ဘုရားရှိတယ်လို့ လက်ခံသူနဲ့ ဆန့်ကျင်ဖက် ယူသူပါ။ သွန်သင်ကြောင့်ဖြစ်စေ၊ ဘာသာရေးအသိုင်းအဝိုင်းကို မကြေနပ်လို့ ဖြစ်စေ "ဘုရားမဲ့" ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ မျက်မြင်မရတဲ့အရာတွေကို ညဏ်မမှီလို့ လက်မခံတာလည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ လက်မခံနိုင်ရုံက ဖြစ်တတ်တယ်လို့ ဆိုရပေမယ့် မရှိဘူးလို့ သူပြောနေတဲ့ ဘုရားကို ဘုရားမရှိကြောင်း ရှာကြံ သက်သေပြရင်း ရန်သူလို တိုက်ခိုက်နေတာကတော့ သူ့ဟာသူ ရှုပ်ထွေးနေတာ၊ ကမောက်ကမဖြစ်နေတာပါ။
"atheism" ဘုရားမဲ့အယူ ဆိုတဲ့ စကားလုံးဟာ မရှိသင့်ဘူးလို့ တချို့က ဆိုကြတယ်။ Sam Harris က သူရဲ့ "Letter toaChristian Nation" ဆိုတဲ့ စာအုပ်မှာ "atheism” ဘုရားမဲ့အယူ ဆိုတဲ့ စကားလုံးဟာ မရှိသင့်ဘူး။ ကိုယ့်ကိုကိုယ် non-astrologer နက္ခတ်ပညာရှင် မဟုတ်သူ၊ non-alchemist ဓါတ်သဘာဝပညာရှင် မဟုတ်သူ လို့ ဆိုင်းဘုတ်မတင့်သင့် သလိုပါပဲ။" လို့ ဆိုတယ်။ "atheist" ဟာ သူမယုံတာကို ယုံကြည်မှုတမျိုး ဖြစ်စေချင်သူပါ။
တသက်လုံး ဘုရားမဲ့ နေပြီးမှ ဒုက္ခရောက်ချိန်၊ သေလုဆဲဆဲမှာ ပြောင်းလဲတာလည်း ရှိတတ်ပါတယ်။ "There are no atheists in foxholes" "ကတုတ်ကျင်းထဲရောက်ရင် ဘုရားမဲ့ မရှိဘူး" ဆိုတဲ့ စကားကလည်း စဉ်းစားစရာပါ။
IN'FIDEL, a. [L. infidelis; in and fidelis; faithful.] ဘာမှ မယုံတတ်သူ
Unbelieving; disbelieving the inspiration of the Scriptures, or the divine institution of Christianity. ဘုရား၊ ကျမ်းစာ၊ တန်ခိုး၊ ကောင်းကင်တမန် စတဲ့ မမြင်ရတဲ့ အရာတွေကို မယုံသူ။
Infidel ဟာ Fidel ရဲ့ ဆန့်ကျင်ဖက်ပါ။ Infidel မယုံတတ်သူဟာ သွန်သင်ချက်ကြောင့် ဖြစ်တတ်သလို၊ မျိုးရိုးကြောင့်လည်း ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ "ဂရိလူမျိုးဟာ သတင်းစကားကို ရှာတယ်။ တွေးခေါ်ဆင်ခြင်တယ်။ ဂျူးလူမျိုးက တန်ခိုးနိမိတ် လက္ခဏာကို ရှာတယ်" ဆိုရင်၊ အတွေးအခေါ်မှာ အားနည်းတဲ့ လူမျိုး၊ တန်ခိုးနိမိတ် လက္ခဏာတွေကို အယုံအကြည် မရှိတဲ့ အမျိုးလည်း ရှိတတ်ပါတယ်။ လူတယောက်ဟာ မှာတဲ့အရာတွေကို သူ့ရဲ့ ပင်ကိုယ် သဘာဝကြောင့် ရိုးရိုးကလေး ယုံနေနိုင်သလို၊ တခြားတယောက်ဟာလည်း မှန်နေတဲ့အရာတွေကို သူ့ပင်ကိုယ်သဘာဝကြောင့် ရိုးရိုးကလေးပဲ မယုံနိုင် ဖြစ်နေနိုင်ပါတယ်။ မှားတယ်မှန်တယ်ဆိုတာထက် ပင်ကိုယ်က ယုံတတ်သူရှိသလို၊ မယုံတတ်သူလည်း ရှိပါတယ်။
Infidel ဆိုတဲ့ စကားကို သဘောထားပြင်းထန်သူ၊ အစွန်းရောက်သူတွေ သုံးရင်တော့ ဒိဌိ ဆိုတဲ့ သဘောရောက်သွားပါတယ်။
Conservative, a. Preservative; having power to preserve inasafe or entire state, or from loss, waste or injury. အစဉ်အလာ ထိန်းသိမ်းချင်သူ
Conservative ကို ရှေးရိုးစွဲ (ဝါဒီ) လို့ ပြန်ဆိုတာဟာ မှားပါတယ်။ ရှေးရိုးစွဲတာကတော့ မကောင်းပါဘူးဆိုပြီး မစဉ်းစားဘဲ နားလည်လွဲသွားတတ်ပါတယ်။ တကယ်တော့ conservative ဟာ ခေတ်နောက်ပြန်ချင်သူ မဟုတ်ဘဲ အစဉ်အလာအရ ကောင်းတဲ့အရာ၊ စောင့်ထိန်းသင့်တာတွေကို စောင့်ထိန်းချင်၊ လက်တွေ့ကျင့်သုံးချင်သူသာ ဖြစ်တယ်။ တချို့ကလည်း conservative တွေဟာ အပြောင်းအလဲကို မလိုလားသူ၊ တီထွင်ဆန်းသစ်မှုတွေကို မနှစ်သက်သူလို့ စွပ်စွဲတတ်ပါတယ်။
နိုင်ငံရေးမှာတော့ conservative ကို right-winger လက်ယာသမား၊ Republican ရီပတ်ဗလီကင် အဖြစ် သုံးနှုံးတတ်ပါတယ်။ တကယ်တော့ ဘယ်လို အစဉ်အလာတွေကို စောင့်ထိန်းချင်နေသလဲ ဆိုတဲ့ အရာကသာ အရေးကြီးပါတယ်။ ကောင်းတဲ့ အစဉ်အလာတွေကို စောင့်ထိန်းချင်တဲ့ conservative ဟာ ကောင်းတယ်။ မကောင်းတဲ့ အစဉ်အလာတွေကို ဖက်တွယ်ချင်တဲ့ conservative ကတော့ မကောင်းပါဘူး။ ရှေးရိုးစွဲ မဖြစ်ချင်တာနဲ့ပဲ conservative မကောင်းဘူး၊ liberal ကောင်းတယ်လို့ မစဉ်မစား ဖြစ်သွားတတ်ပါတယ်။
ခရစ်ယာန်မှာ Conservative ဆိုတာ သမ္မာကျမ်းစာကို လေးစားတန်ဖိုးထားသူ၊ ကျမ်းစာကို လက်တွေ့ကျင့်သုံးချင်သူတွေကို ဆိုလိုတယ်။
နှစ်ခြင်းအသိုင်းအဝိုင်းမှာတော့ Conservative ဟာ Southern Baptist Convention တောင်ပိုင်းနှစ်ခြင်း အသင်းချုပ်ထဲမှာ liberals တွေနဲ့ အားပြိုင် လွန်ဆွဲ ရုန်းကန်နေသူတွေကို ပြောတာပါ။ သူဟာ SBC ရဲ့ အပြင်ဖက်မှာ လွတ်လပ်စွာရပ်တည်တဲ့ Independent တွေလို အပြင်ဖက်ကို ထွက်မသွားဘဲ၊ အတွင်းကနေ SBC ကို ပြုပြင်ဖို့ ကြိုးစားရုန်းကန်နေရသူဖြစ်ပါတယ်။ ထွက်သွားသူ မှန်သလား? ကျန်ရစ်သူ မှန်သလား? ဘယ်သူက ပိုအောင်မြင်မလဲ? ဆိုတဲ့ မေးခွန်းတွေ မေးတတ်ကြပေမယ့် သေချာတာကတော့ သူတို့ဟာ ညီအကိုတွေ ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ အချက်ပါ။
Posted by Papa at 2:51 AM
Labels: Papa, စာပေ
သခင်အဖြစ် ဝန်ခံမှ ကယ်တင်ခြင်း ရမယ်ဆိုတဲ့ အခြားသော ဧဝံဂေလိ
“လူနှင့်မစပ်ဆိုင်၊ လူ၏အခွင့်မရှိဘဲလျက်၊ ယေရှုခရစ်၏အခွင့်နှင့်၎င်း၊ ထိုသခင်ကို သေခြင်းမှ ထမြောက်စေတော်မူသော ခမည်းတော်ဘုရား၏ အခွင့်နှင့်၎င်း၊ တမန်တော်ဖြစ်သောငါပေါလုမှစ၍၊ - ငါ့ထံမှာရှိသော ညီအကိုအပေါင်းတို့သည် ဂလာတိပြည်၌ရှိသော အသင်းတော်များကို ကြားလိုက်ပါ၏။ - သခင်ယေရှုခရစ်နှင့် ခမည်းတော်ဘုရားထံတော်က ကျေးဇူးတော်နှင့် ငြိမ်သက်ခြင်းသည် သင်တို့၌ ရှိပါစေသော။ - ထိုသခင်သည် ငါတို့အဘတည်းဟူသော ဘုရားသခင်၏ အလိုတော်နှင့်အညီ ဆိုးညစ်သော ဤပစ္စုပ္ပန်ဘဝမှ ငါတို့ကို ကယ်နှူတ်ခြင်းငှါ၊ ငါတို့အပြစ်ကြောင့် ကိုယ်ကိုကိုယ် အပ်ပေးတော်မူ၏။ ထိုဘုရားသခင်သည် ကမ္ဘာအဆက်ဆက် ဘုန်းကြီးတော်မူစေသတည်း။ အာမင်။
ခရစ်တော်၏ ကျေးဇူးအားဖြင့် သင်တို့ကို ခေါ်တော်မူသောသူနှင့် ဤမျှလောက် မြန်မြန်ခွါ၍ သင်တို့သည် အခြားသောဧဝံဂေလိတရားကို ခံယူကြသောကြောင့် ငါသည် အံ့ဩခြင်းရှိ၏။ ထိုဧဝံဂေလိတရားသည် ဧဝံဂေလိတရားမဟုတ်။ သင်တို့ကို နှောက်ယှက်၍ ခရစ်တော်၏ ဧဝံဂေလိတရားကို မှောက်လှန်ချင်သောသူအချို့ ရှိကြ၏။ - သို့သော်လည်း သင်တို့အား ငါဟောပြောသော ဧဝံဂေလိတရားမှတပါး အခြားသောဧဝံဂေလိတရားကို ငါတို့သည် ဟောပြောသော်၎င်း၊ ကောင်းကင်ဘုံမှလာသော ကောင်းကင်တမန် ဟောပြောသော်၎င်း၊ ဟောပြောသောသူသည် ကျိန်တော်မူခြင်းကို ခံစေ။ - တဖန်တုံ၊ သင်တို့ခံယူပြီးသော ဧဝံဂေလိတရားမှတပါး အခြားသောဧဝံဂေလိတရားကို တစုံတယောက်သောသူသည် ဟောပြောလျှင်၊ ထိုသူသည် ကျိန်တော်မူခြင်းကို ခံစေဟု ငါတို့ဆိုခဲ့ပြီးသည့်အတိုင်း ယခု ငါထပ်၍ ဆိုသေး၏။” ဂလာတိ ၁း ၁-၉
“သခင်အဖြစ် ဝန်ခံမှ ကယ်တင်ခြင်းရမယ်” လို့ သွန်သင်တာဟာ ခရစ်ယာန်တွေကို နားလည်မှု ရှုပ်ထွေးစေတယ်။ အဲဒီဆရာတွေက “သခင်ယေရှုကို သခင်အဖြစ် ဝန်ခံမှ ကယ်တင်ခြင်းရမယ်” လို့ ဆိုတယ်။ “သခင်ယေရှုကို သခင်အဖြစ် လက်မခံဘဲ ကယ်တင်ရှင်အဖြစ် လက်မခံနိုင်ဘူး။ သခင်ယေရှုဟာ ကိုယ့်အသက်တာရဲ့ သခင်မဖြစ်ရင် ကယ်တင်ခြင်း မရဘူး။” လို့ ဆိုကြတယ်။
ကျမ်းစာကတော့ “ယုံကြည်သောအားဖြင့် ကျေးဇူးတော်ကြောင့် ကယ်တင်ခြင်းသို့ ရောက်ရ၏။” လို့ပဲ ပြောပါတယ်။ “ယုံကြည်သောအားဖြင့် ကျေးဇူးတော်ကြောင့် ကယ်တင်ခြင်းသို့ ရောက်ရ၏။ ကိုယ့်အလိုအလျောက် ရောက်သည်မဟုတ်။ ဘုရားသခင် သနားတော်မူရာ ဖြစ်သတည်း။ ကိုယ့်ကုသိုလ်ကြောင့် ကယ်တင်တော်မူခြင်းသို့ ရောက်သည်မဟုတ်။ သို့ဖြစ်၍ အဘယ်သူမျှ ဝါကြွားစရာ အခွင့်မရှိ။” ဧဖက် ၂း ၈-၉
ဒါပေမယ့် “သခင်အဖြစ် ဝန်ခံမှ ကယ်တင်ခြင်းရမယ်” လို့ သွန်သင်သူတွေကတော့ “သခင်ယေရှုကို ယုံကြည် အားကိုးရုံနဲ့ မပြီးဘူး။ ကယ်တင်ခြင်းရဖို့ သခင်အဖြစ်ပါ ဝန်ခံ အသက်ရှင်မှ ရမယ်” လို့ ဆိုပါတယ်။ ဒီလို သွန်သင်တာဟာ ဘုရားကျေးဇူးတော်ကို အဓိပ္ပါယ်မဲ့သွားစေတယ်။ ဒါကို ကျမ်းစာက “အခြားသောဧဝံဂေလိ” လို့ ခေါ်ပါတယ်။
“ခရစ်တော်၏ကျေးဇူးအားဖြင့် သင်တို့ကို ခေါ်တော်မူသောသူနှင့် ဤမျှလောက် မြန်မြန်ခွါ၍ သင်တို့သည် အခြားသောဧဝံဂေလိတရားကို ခံယူကြသောကြောင့် ငါသည် အံ့ဩခြင်းရှိ၏။” အငယ် ၆။
ရှင်ပေါလုက ဘုရားသခင်ရဲ့ ကျေးဇူးတော် ဧဝံဂေလိတရားနဲ့ အခြားသောဧဝံဂေလိတရားကို နှိုင်းယှဉ်ပြပါတယ်။ အခြားသောဧဝံဂေလိတရားရဲ့ အဓိပ္ပါယ်ကို ဖွင့်မပြဘူး။ “ထိုဧဝံဂေလိတရားသည် ဧဝံဂေလိတရားမဟုတ်။ သင်တို့ကို နှောက်ယှက်၍ …..” (အငယ် ၇) အခြားသောဧဝံဂေလိကို ဟောတာဟာ လူတွေကို နှေက်ယှက်တာပါ။ ဘုရားရဲ့ ကျေးဇူးတော်ဧဝံဂေလိတရားကို မှောက်လှန်တာပါ။ ဒါကြောင့် အငယ် ၈ မှာ ပြင်းပြင်းထန်ထန် ပြောပါတယ်။ “သင်တို့အား ငါဟောပြောသော ဧဝံဂေလိတရားမှတပါး အခြားသော ဧဝံဂေလိတရားကို ငါတို့သည် ဟောပြောသော်၎င်း၊ ကောင်းကင်ဘုံမှလာသော ကောင်းကင်တမန် ဟောပြောသော်၎င်း၊ ဟောပြောသောသူသည် ကျိန်တော်မူခြင်းကို ခံစေ။”
အငယ် ၉ မှာ ထပ်ပြောပါတယ်။ “သင်တို့ခံယူပြီးသော ဧဝံဂေလိတရားမှတပါး အခြားသော ဧဝံဂေလိတရားကို တစုံတယောက်သောသူသည် ဟောပြောလျှင်၊ ထိုသူသည် ကျိန်တော်မူခြင်းကို ခံစေဟု ငါတို့ဆိုခဲ့ပြီးသည့်အတိုင်း ယခု ငါထပ်၍ ဆိုသေး၏။”
“ခရစ်တော်ရဲ့ ကျေးဇူးတော် ဧဝံဂေလိတရားနဲ့ ခွါပြီး အခြားသောဧဝံဂေလိတရားကို ခံယူကြတဲ့အတွက် မင်းတို့ကို ငါမယုံနိုင်လောက်အောင် ဖြစ်ရ၊ အံ့ဩရတယ်ကွာ” လို့ ရှင်ပေါလုက ပြောပါတယ်။ “အခြားသော ဧဝံဂေလိ” ရဲ့ အဓိပ္ပါယ်ကို ဖွင့်ပြမထားဘူး။ ဒါကြောင့် အလားတူ အဓိပ္ပါယ်ရတဲ့ ကျမ်းချက်တွေနဲ့ ရှင်းပြပေးပါမယ်။
ခရစ်တော်ရဲ့ ကျေးဇူးတော် ဧဝံဂေလိတရားက တမျိုးတည်း ဖြစ်ပါတယ်။ “ယုံကြည်သောအားဖြင့် ကျေးဇူးတော်ကြောင့် ကယ်တင်ခြင်းသို့ ရောက်ရ၏။” ဆိုတဲ့ ကျမ်းချက်ကို ဆန့်ကျင်တာကတော့ “အခြားသော ဧဝံဂေလိ” ပေါ့။ ခရစ်တော်က ကိုယ်စားအသေခံပေးလို့ ခရစ်တော်ကို ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် ကယ်တင်ခြင်းရတယ်လို့ ပြောပြီးမှ အကျင့်တခုခု ထပ်ပေါင်းရဦးမယ်လို့ ပြောရင် ပြောတဲ့သူဟာ ဘုရားသခင်ရဲ့ ကျေးဇူးတော် ဧဝံဂေလိတရားကို ဆန့်ကျင်တဲ့သူပါပဲ။
“ကျေးဇူးတော်အားဖြင့် ရှိလျှင်၊ ကိုယ်ကျင့်သော အကျင့်အားဖြင့် မရှိ။ ရှိလျှင် ကျေးဇူးသည် ကျေးဇူး မဟုတ်။ ကိုယ်ကျင့်သော အကျင့်အားဖြင့် ရှိလျှင် ကျေးဇူးအားဖြင့် မရှိ။ ရှိလျှင် ကိုယ်ကျင့်သော အကျင့်သည် အကျင့် မဟုတ်။” - ရောမ ၁၁း ၆
ကယ်တင်ခြင်းရတာဟာ ကျေးဇူးတော်နဲ့ အကျင့် ပေါင်းလို့ ရတာမဟုတ်ဘူး။ ကျေးဇူးတော် (သို့) အကျင့် တခုခု ကြောင့်သာ ဖြစ်ရပါမယ်။
လူအများစုက “ကျေးဇူးတော်” ကို ကောင်းကောင်း နားမလည်ဘူး။ ကျေးဇူးတော် ဆိုတာက ငရဲသွားထိုက်တဲ့ အပြစ်သားကို ထိုက်တန်လို့ မဟုတ်ဘဲ၊ ကောင်းလို့မဟုတ်ဘဲ ရောက်ခွင့်ပေးတာ၊ ဘုရားက ကျေးဇူးပြုတာဖြစ်တယ်။
ကယ်တင်ခြင်းကို ရှုပ်ထွေးနေသူတွေ ရှိတယ်။ “ကောင်းကင်ကို ဘယ်လို ရောက်နိုင်သလဲ” လို့ လူ ၁၀ ယောက်ကို မေးကြည့်ပါ။ အဖြေ ဆယ်မျိုး ရပါလိမ့်မယ်။ တခုမှ မမှန်တဲ့ ဆင်တူရိုးမှား အဖြေတွေပေါ့။
အားလုံးကိုခြုံကြည့်ရင် ကယ်တင်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ ဘာသာတရားအားလုံးရဲ့ သွန်သင်ပုံစနစ် (၂)မျိုးပဲရှိပါတယ်။ တမျိုးက ကိုယ့်ကိုကိုယ် ကယ်တင်ခြင်း။ နောက်တမျိုးက ဘုရားသခင်က လူကို ကယ်တင်ခြင်းပါပဲ။ လူတွေက -ကယ်တင်ခြင်းမရောက်ခင် ကိုယ်တိုင်ပြောင်းလဲမှ၊ ပြုပြင်မှ၊ ဒါမှမဟုတ် အသက်တာသန့်ရှင်းလာမှ ကယ်တင်ခြင်း ရောက်မယ်လို့ ဆိုကြတယ်။ ပညတ်တော် (၁၀)ပါးစောင့်ထိန်းဖို့ ဂတိသစ္စာထားပြီး ကိုယ်ကိုကိုယ် ပြန်ကယ်ချင်ကြတယ်။ စက္ကရီမင့် (၇)ခု လက်ခံရခြင်းအားဖြင့်၊ ဒါမှမဟုတ် နာခံခြင်းအားဖြင့် ကိုယ်ကိုကိုယ် ကယ်ချင်ကြတယ်။ အချို့က အပြုအမူ၊ အကျင့်အားဖြင့် ကိုယ်ကိုကိုယ် ပြန်ကယ်ဖို့ သွန်သင်တယ်။ သခင်အဖြစ်ဝန်ခံမှ လို့ သွန်သင်သူတွေကလည်း သခင်ယေရှုကို အသက်တာမှာ သခင်အဖြစ် ဝန်ခံခြင်းအားဖြင့်သာ ကိုယ့်ကိုကိုယ် ကယ်တင်တယ်လို့ သွန်သင်နေကြတယ်။
“ငါသည် ခရစ်တော်၏ဧဝံဂေလိတရားကြောင့် ရှက်ကြောက်ခြင်းမရှိ။ အကြောင်းမူကား၊ ထိုတရားသည် ရှေးဦးစွာ၌ ယုဒလူ၊ နောက်၌ ဟေလသလူ၊ ယုံကြည်သမျှသောသူအပေါင်းတို့ကို ကယ်တင်စေသော ဘုရားသခင်၏ တန်ခိုးတော်ဖြစ်၏။” (ရောမ ၁း ၁၆) ဘယ်သူတွေကို ကယ်တင်သလဲ။ အကျင့်ကျင့်တဲ့သူတွေကိုလား။ မဟုတ်ပါဘူး။ ယုံကြည်သူတွေကိုပါ။
ဧဝံဂေလိတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီး လုပ်နိုင်တာတခုတည်းကတော့ ယုံကြည်ဖို့ပါပဲ။ ဧဝံဂေလိတရား ဆိုတာ “သခင်ယေရှု လောကကို ကြွလာတယ်။ ကျွန်တော်တို့ အပြစ်တွေအတွက် ကျွန်တော်တို့ ကိုယ်စား ကားတိုင်မှာ ဘယ်လိုအသေခံတယ်၊ သဂြိုင်္လ်ပြီး ရှင်ပြန်ထမြောက်တယ်”ဆိုတဲ့ သတင်းကောင်းပါ။
ဧဝံဂေလိတရားနဲ့ သမ္မာတရားကို မရောထွေးလိုက်ပါနဲ့။ ဧဝံဂေလိတရားဟာ သမ္မာတရားပါ။ ဒါပေမယ့် သမ္မာတရားအားလုံးဟာ ဧဝံဂေလိတရားမဟုတ်ဘူး။ သခင်ယေရှုဟောခဲ့တဲ့ သမ္မာတရားတချက်ကို ဟောသင့်တယ်ထင်လို့ ကျွန်တော်ဟောပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အဲဒါ ဧဝံဂေလိတရားမဟုတ်ဘူး။ မရဏာနိုင်ငံဆိုတာ သတင်းကောင်းမဟုတ်ဘူး။ သတင်းဆိုးပါ။ တရားစီရင်ခြင်းအကြောင်း ကျွန်တော်ဟောတဲ့အခါ သမ္မာတရားကို ဟောတာပါပဲ။ ဒါပေမယ့် ဧဝံဂေလိတရား မဟုတ်ဘူး။ ဒါပေမယ့် သခင်ယေရှုက အပြစ်သားတွေကိုချစ်တယ်။ အပြစ်သားရဲ့ အပြစ်ကြွေးကိုပေးဆပ်ဖို့ အပြစ်သားရဲ့ကိုယ်စား အသေခံခဲ့တယ်။ အသေခံပေးဆပ်ခဲ့တာ ဘုရားသခင်က ကျေနပ်လို့ သဂြိုင်္လ်ပြီး ၃-ရက်မြောက်တဲ့နေ့မှာ ထမြောက်စေတယ်လို့ ဟောရင် ဧဝံဂေလိတရား ဟောတာပါပဲ။
အသက်ကြီးတဲ့ တရားဟောဆရာတပါးက လူငယ်တရားဟောဆရာ တစုကို ပြောဖူးပါတယ်။ စင်မြင့်ပေါ်က မဆင်းခင် လူငယ်သင်းအုပ်တယောက်က “ဆရာ မသွားခင် အကြံပေးစကားတခွန်းလောက် ပြောပေးပါဦး”လို့ မေးပါတယ်။ ဆရာကြီးက ခဏစဉ်းစားပြီးတော့ - - - “ငါ့ညီတို့ လူတွေ ကယ်တင်ခြင်း ဘယ်လိုရောက်နိုင်တယ်ဆိုတာ ရှင်းအောင်ဟောကြ” လို့ ဆိုပါတယ်။
တရားဟောဆရာများစွာဟာ ဧဝံဂေလိတရားကို မွှေနှောက်ကြတယ်။ ဘုရားသခင်ရဲ့ ကျေးဇူးတော်ရေဟာ ကျောက်သလင်းလို ကြည်လင်ရမယ်။ တရားဟောဆရာတွေက ဘုရားသခင်ရဲ့ ကျေးဇူးတော်နဲ့ အကျင့်ကို ရောပစ်ကြတဲ့အခါ ကျွန်တော့စိတ် အနှောင့်အယှက်ဖြစ်တယ်။ ရှင်ပေါလုက “ငါတို့သည် ဟောပြောသော်၎င်း၊ ကောင်းကင်ဘုံမှလာသော ကောင်းကင်တမန်ဟောပြောသော်၎င်း၊ ဟောပြောသောသူသည် ကျိန်တော်မူခြင်းကိုခံစေ။” ရှင်ပေါလုရဲ့လေသံက ပြင်းပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒါဟာ ဧဝံဂေလိတရားကို မှောက်လှန်နေတဲ့ တရားဟောဆရာတွေ အပေါ်မှာထားတဲ့ ဘုရားသခင်ရဲ့စိတ်တော်ပါပဲ။ ရှင်ပေါလုက အခြားသော ဧဝံဂေလိတရားကိုဟောရင် ကောင်းကင်တမန်ပင်လျှင် အကျိန်ခံရပါစေတဲ့။
ဘာသာရေးသမားတွေက ဧဝံဂေလိတရားမှာ တခုခုကို ပေါင်းထည့်ချင်ကြတယ်။ ကယ်တင်ခြင်းရဖို့ ဘုရားသခင်ကို အကူအညီပေးချင်ကြတယ်။ ကယ်တင်ခြင်းရဖို့ မကူနိုင်ဘူးဆိုရင်တောင် ကယ်တင်ခြင်းမဆုံးရှုံးဖို့ ကိုယ်ကိုကိုယ် ထိန်းသိမ်းချင်တတ်တယ်။
အာဒံနဲ့ဧဝဟာ အဝတ်အချည်းအစည်းကို ဖုံးကွယ်ဖို့ သင်္ဘောသဖန်းရွက်တွေကို ချုပ်စပ်ပြီး ခါးစည်းလုပ်ခဲ့တယ်။ တခုခုမှားမှန်းတော့ သူတို့သိပါတယ်။ ဘုရားသခင်ကြွလာတော်မူတော့ ဘုရားသခင် ရှေ့တော်မှာ မှန်ကန်ဖို့ ကြိုးစားတယ်။ မကြွလာခင်မှာတော့ သင်္ဘောသဖန်းရွက် ဘာသာရေးကလေးနဲ့ ပျော်လို့၊ ရွှင်လို့၊ ကြေနပ်လို့။ ပြီးတော့မှ သင်္ဘောသဖန်းရွက်ကြောင့် စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်ပြီး ပြေးပုန်းကြတယ်။ ဘုရားသခင်က သူတို့ကိုခေါ်ပြီး အပြစ်မဲ့တဲ့ တိရိစ္ဆာန်ကလေးကိုသတ်။ (ခရစ်တော် ကိုယ်စားအသေခံပေးတာကို ပုံဆောင်ပါတယ်။) သားရေကိုယူပြီးတော့ သူတို့အတွက် ဝတ်လုံလုပ်ပေးတော်မူတယ်။ သူတို့ဖာသာ သူတို့လုပ်တဲ့ သင်္ဘောသဖန်းရွက်တရွက်နဲ့ ပစ်မထားဘူး။ ကယ်တင်ခြင်းဟာ ထာဝရဘုရားကြောင့်ပါ။
အာဒံနဲ့ဧဝဟာ သင်္ဘောသဖန်းရွက်နဲ့ အခြားတယောက်ယောက်ကို တွေ့ဝံ့ပေမယ့် ဘုရားသခင်ကိုတော့ ရင်မဆိုင်ရဲဘူး။
ကိုယ့်ဘာသာတရားနဲ့ လူတွေကို ရင်ဆိုင်ရဲချင် ရဲမယ်။ အနန္တတန်ခိုးရှင် ဘုရားသခင် ရှေ့တော်မှာတော့ ရပ်ရဲမှာမဟုတ်ဘူး။ ဘုရားသခင်က သားတော်ကို ကားတိုင်မှာတင်။ သင့်အပြစ်များကို ကိုယ်တော့အပေါ်မှာတင်။ အပြစ်ရဲ့အခ မရဏာနိုင်ငံမှ သင့်ကိုကယ်တင်နိုင်ဖို့ သားတော်ရင်းအပေါ်မှာ အမျက်တော် သွန်းလောင်းတော်မူခဲ့ပါတယ်။
ဘုရားသခင်ရှေ့တော်မှာ သင့်ရဲ့သင်္ဘောသဖန်းရွက် ဘာသာတရားနဲ့ ရပ်ရဲမလား။ သမ္မာကျမ်းစာထဲမှာ ခရစ်တော်ကို တပိုင်းတစယုံကြည်သူအတွက် ဘာဂတိတော်မှ မရှိဘူး။ အခြားဘာကိုမှ မကိုးစားဘဲ ခရစ်တော်တပါးတည်းကိုသာ အားကိုးရမယ်။
သခင်အဖြစ်ဝန်ခံမှ ကယ်တင်ခြင်းရောက်မယ်လို့ သွန်သင်နေသူများက “ကယ်တင်ခြင်းရမယ့် အချိန်မှာ အသက်တာကို သခင်ခရစ်တော်ရဲ့ ထိန်းချုပ်ခွင့်မပြုရင် သင်ကယ်တင်ခြင်းမရသေးဘူး”လို့ ဆိုကြတယ်။
ကယ်တင်ခြင်းရဖို့ ခရစ်တော်ကို သခင်အဖြစ် ဆက်ကပ်မှုရှိရမလား။
သခင်အဖြစ်ဝန်ခံမှလို့ သွန်သင်သူတွေက ကယ်တင်ရှင်နဲ့ သခင်ကို မခွဲတတ်ဘူး။ “သခင်အဖြစ် လက်မခံရင်၊ ကယ်တင်ရှင်အဖြစ် လက်မခံနိုင်ဘူး။ ယေရှုခရစ်တော်ကို သင့်အသက်တာရဲ့ သခင်အဖြစ် လက်မခံထားရင် ကယ်တင်ခြင်းမရဘူး” လို့ ဆိုကြတယ်။ ဒါပေမယ့် သူတို့ကိုမေးကြည့်ရင် သူတို့အသက်တာမှာ သခင်ယေရှုဟာ သူတို့ရဲ့သခင်မဖြစ်တာ တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။
သခင်အဖြစ်ဝန်ခံမှလို့ သွန်သင်သူတယောက်ကို “ခင်ဗျား သခင်ယေရှုကို သခင်အဖြစ် ကိုးစားကတည်းက သခင်ယေရှုဟာ ခင်ဗျားရဲ့သခင် အမြဲဖြစ်နေခဲ့သလား။” “ခင်ဗျား ကယ်တင်ခြင်း ရကတည်းကစပြီး၊ သခင်ခရစ်တော်ဟာ ခင်ဗျားရဲ့သခင် မဖြစ်ခဲ့တဲ့အချိန်ရှိသလား။”လို့ မေးတော့ ချက်ချင်းဘဲ သူက “အင်းပေါ့၊ ကိုယ်တော်က အမြဲတမ်းသခင်ပါပဲ။ ဒါပေမယ့် မနာခံတဲ့အချိန်တွေတော့ ရှိတာပေါ့။” လို့ ဖြေပါတယ်။
မနာခံရင် သခင်မဖြစ်တော့ဘူး။ သခင်ယေရှုက ထိန်းချုပ်နေတာမဟုတ်ဘူး။ ကိုယ့်ကိုကိုယ် ထိန်းချုပ်နေတာပါ။ “ငါ့စကားကို နားမထောင်ဘဲလျက်၊ ငါ့ကို သခင်၊ သခင်ဟု အဘယ့်ကြောင့် ခေါ်ကြသနည်း။” (လုကာ ၆း ၄၆) စကားနားမထောင်ဘဲ သခင်၊ သခင်လို့ခေါ်တာ ရှေ့နောက်မညီဘူး။ သခင်ယေရှုဟာ သူ့သခင် မဖြစ်တာကို အဲဒီလူ နားလည်သွားတဲ့အခါ၊ “ဟို - - ကယ်တင်ခြင်းရဖို့ သခင်ယေရှုကို သခင်အပြည့်အဝ ဖြစ်နေမှလို့ ကျွန်တော်မပြောပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ကယ်တင်ခြင်းရချိန်၊ ကယ်တင်ရှင်အဖြစ် အားကိုးချိန်မှာ သခင်ဘုရားရဲ့ ထိန်းချုပ်ခံချင်စိတ်ရှိရမယ် လို့ ပြောတာပါ” - - တဲ့။
ကယ်တင်ခြင်းရဖို့ သခင်ယေရှုဟာ ကိုယ့်ဘဝရဲ့ သခင် အပြည့်အဝဖြစ်နေဖို့ စိတ်စေတနာ ရှိရမယ်ဆိုရင် သူမနာခံမယ့်အချိန်၊ စေတနာမရှိမယ့်အချိန်တွေ ရှိမလာအောင် ဘယ်လောက်ကြာကြာ စောင့်နေနိုင်မလဲ။
ကယ်တင်ခြင်းရောက်ဖို့ လမ်း ၂ လမ်းမရှိဘူး။ တမျိုးက ယုံကြည်သောအားဖြင့် ကျေးဇူးတော်ကြောင့် ရောက်ရင်ရောက်။ နောက်တမျိုးက ယုံကြည်ဆက်ကပ်သောအားဖြင့် ကျေးဇူးတော်ကြောင့် ရောက်ရင်ရောက်ပေါ့။ သမ္မာကျမ်းစာကတော့ “ယုံကြည်သောအားဖြင့် ကျေးဇူးတော်ကြောင့် ကယ်တင်ခြင်းသို့ ရောက်ရ၏။ ကိုယ်အလိုအလျောက်ရောက်သည်မဟုတ်၊ ဘုရားသခင် သနားတော်မူရာဖြစ်သတည်း။ ကိုယ်ကုသိုလ်ကြောင့် ကယ်တင်တော်မူခြင်းသို့ ရောက်သည်မဟုတ်၊ သို့ဖြစ်၍ အဘယ်သူမျှဝါကြွားစရာအခွင့်မရှိ။” (ဧဖက် ၂း ၈၊ ၉) ဒီကျမ်းချက်က ယုံကြည်သောအားဖြင့် ကျေးဇူးတော်ကြောင့် ရောက်ရတယ်လို့ဆိုရင်၊ ယုံကြည်ဆက်ကပ်သောအားဖြင့် ကျေးဇူးတော်ကြောင့် ကယ်တင်ခြင်းမရောက်တော့ဘူး။ ယုံကြည်ခြင်းမှာ တခုခု ထပ်ပေါင်းထည့်နေရင် မရောက်တော့ဘူး။ ယုံကြည်သောအားဖြင့် ကျေးဇူးတော်ကြောင့်သာ ရောက်ပါတယ်။
မိတ်ဆွေက - - - “ Dr. Hutson ခင်ဗျား ဆက်ကပ်တာတွေကို အယုံအကြည်မရှိဘူးလား” - - ယုံပါတယ်၊ စိတ်နှလုံးအကြွင်းမဲ့ ယုံပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကယ်တင်ခြင်းရဖို့ မဟုတ်ဘူး။ ဆက်ကပ်တယ်ဆိုတာ ဆက်ကပ်တဲ့ နေရာအပေါ်လိုက်ပြီး မှန်နိုင်သလို၊ မှားလည်း မှားသွားနိုင်တယ်။ စိန်လက်စွပ်တကွင်းဟာ မိန်းမပျိုရဲ့လက်ချောင်းမှာ ဝတ်ထားရင် လှပါတယ်။ သူ့ကို ပိုလှစေပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သူ့ရဲ့ဒေါက်ဖိနပ်မှာ ထားကြည့်ပါ။ စိတ်ပျက်စရာဖြစ်သွားမှာပေါ့။
သခင်ခရစ်တော်ကို သခင်အဖြစ် ဆက်ကပ်တာဟာ သိပ်ကောင်းပါတယ်။ အံ့ဩစရာပါ။ ဒါပေမယ့် ကယ်တင်ခြင်းရဖို့ မဖြစ်မနေ ဆက်ကပ်ရမယ်ဆိုရင်တော့ အရုပ်ဆိုး အကျည်းတန်သွားပြီ။ ညစ်ညမ်း ယုတ်မာသွားပြီ။ ဘုရားသခင်ရဲ့ အံ့ဩဘွယ်ကျေးဇူးတော်ကို အလကားဖြစ်သွားစေပြီ။
သမ္မာကျမ်းစာထဲမှ မဆက်ကပ်တဲ့ ယုံကြည်သူများ
မဆက်ကပ်တဲ့ ဥပမာ (၃) မျိုးပေးပါမယ်။
၁။ ကယ်တင်ခြင်းရပြီး အပြည့်အဝဆက်ကပ်ပြီးမှ ရွေ့လျော့သူများ
၂။ ကယ်တင်ခြင်းရပြီးနောက် အတော်ကြာသည့်အထိ မဆက်ကပ်ဘဲ နေတဲ့ ယုံကြည်သူများ
၃။ ခရစ်တော်ကို ကယ်တင်ရှင်အဖြစ်ကိုးစားပြီးနောက် တသက်လုံး ဘယ်တော့မှ သခင်အဖြစ် မဆက်ကပ်တဲ့ ယုံကြည်သူများ
* ဒါဝိဒ်ဟာ ဆက်ကပ်ပြီးမှ ပျက်ပျယ်သွားသူပါ။ ဒါဝိဒ်ဟာ ကယ်တင်ခြင်းရချိန်မှာ ခရစ်တော်ကို အသက်တာရဲ့သခင်အဖြစ် ဆက်ကပ်ခဲ့ချင် ဆက်ကပ်ခဲ့ပါမယ်။ မဆက်ကပ်ဘဲလည်း ရှိနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဗာသရှေဘကို ပြစ်မှားချိန်မှာတော့ သခင်ယေရှုဟာ သူ့ရဲ့သခင်မဖြစ်ပါဘူး။ ဒီအချိန်မှာ ဒါဝိဒ်က သခင်ပါ။ ဒါဝိဒ်ဟာ ကယ်တင်ခြင်းရချိန်မှာ ခရစ်တော်ကို သခင်အဖြစ် ဆက်ကပ်ပါလိမ့်မယ်။ ဒါမှမဟုတ် မဆက်ကပ်ဘဲ နေချင်နေခဲ့ပါလိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့် ဥရိယကို စစ်ပွဲထဲလွှတ်ပြီး သတ်ခဲ့ချိန်မှာတော့ သခင်ခရစ်တော်ဟာ သူ့သခင် မဖြစ်ပါဘူး။ သခင်ယေရှုဟာ ဒါဝိဒ်ရဲ့သခင် ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ဆိုရင်တောင် အဲဒီဆက်ကပ်မှုဟာ ပျက်သွားပြီဆိုတာ သေချာပါတယ်။ ဒါဝိဒ်ဟာ သူ့မယားပြစ်မှားပြီး၊ လူ့အသက်သတ်ချိန်မှာ ခရစ်တော်ကို သူ့ရဲ့သခင်အဖြစ် မဆက်ကပ်ပါဘူး။ တခါက ဆက်ကပ်ခဲ့ရင်လည်း ပျက်သွားပါပြီ။
ကယ်တင်ခြင်းရဖို့ သခင်ခရစ်တော်ထံ အပြည့်အဝ ဆက်ကပ်ရမယ်ဆိုရင်၊ ဒါဝိဒ်ဟာ သူပြန်ပြီး အပြည့်အဝ မဆက်ကပ်မချင်း ကယ်တင်ခြင်း ရှုံးနေမှာဘဲ။ ဒါပေမယ့် မရှုံးခဲ့ပါဘူး။ သူဆုံးရှုံးတာက “ကယ်တင်ခြင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့ ဝမ်းမြောက်ခြင်း” ပါ။ (ဆာလံ ၅၁ ၁၂) သူက “ကယ်တင်တော်မူခြင်းနှင့်ယှဉ်သော ဝမ်းမြောက်ခြင်းအခွင့်ကို ပြန်၍ ပေးသနားတော်မူပါ။” လို့ ဆုတောင်းပါတယ်။ “အို ထာဝရဘုရား၊ ကိုယ်တော်ဟာ ကျွန်တော့အသက်တာမှာ သခင်မဖြစ်ခဲ့လို့ ကယ်တင်တော်မူပါ” လို့ ဆုမတောင်းခဲ့ပါဘူး။
ဘုရားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကြောင့် ကယ်တင်ခြင်းရောက်ပြီးနောက်၊ ခရစ်တော်ထံ သခင်အဖြစ်ဝန်ခံ ဆက်ကပ်ပြီးမှ ပျက်ပြယ်သွားတဲ့ နောက်ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်က - - နောဧ ပါ။ “နောဧမူကား ထာဝရဘုရား၏ စိတ်တော်နှင့် တွေ့သောသူ ဖြစ်သတည်း။” (ကမ္ဘာ ၆း၈) နောဧ ကယ်တင်ခြင်းရပါတယ်။ သူဟာ ကယ်တင်ခြင်းရတဲ့အချိန်မှာ သခင်အဖြစ် ဆက်ကပ်ခဲ့နိုင်ပါတယ်။ ဒါမှမဟုတ် မဆက်ကပ်ခဲ့ဘဲ နေခဲ့နိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် နောဧရဲ့သင်္ဘော မြေပေါ်တင်ချိန်မှာ နောဧ စပျစ်ရည်သောက်ပါတယ်။ စပျစ်ရည် အမူးလွန်နေချိန် သားတွေရှေ့မှာ အဝတ်အချည်းစည်း ဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။ ကယ်တင်ခြင်းရချိန်မှာ နောဧဟာ သူ့အသက်တာရဲ့ သခင်ခရစ်တော်ကို ဝန်ခံဆက်ကပ်တယ်ဆိုရင်၊ သူ့ရဲ့ဆက်ကပ်မှုဟာ ပျက်သွားပါပြီ။ နောဧ စပျစ်ရည်သောက်နေချိန်မှာ ယေရှုခရစ်တော်ဟာ သူ့ကို ထိန်းချုပ်နေတယ်လို့ မဆိုနိုင်ပါဘူး။ နောဧက သူ့ကိုယ်သူ ထိန်းချုပ်နေတာပါ။ သူ့ရဲ့ အကျင့်အကြံ အပြုအမူအတွက် သခင်ဘုရားကို အပြစ်တင်လို့မရပါဘူး။
တမန်တော်ပေတရုလည်း ဆက်ကပ်ပြီးမှ ပျက်ပြယ်သွားခဲ့ရသူပါ။ “ဤသူရှိသမျှတို့သည် ကိုယ်တော်ကြောင့် စိတ်ပျက်ကြသော်လည်း၊ အကျွန်ုပ်သည် စိတ်အလျှင်းမပျက်ပါ။” လို့ဝန်ခံခဲ့သူပါ။ ဒါပေမယ့် ရန်သူတွေနောက်ကိုလိုက်ခဲ့ပြီးနောက် စာတန်ရဲ့မီးကြောင့် ပူလောင်နေခဲ့ရပါတယ်။
ရန်သူတယောက်က “သူ့နောက်လိုက်တပည့်တယောက် ဒီမှာဟေ့” လို့ ဆိုတဲ့အခါ- - ပေတရုက “ဟင့်အင်း၊ ယေရှုကို ငါမသိဘူး။” လို့ ငြင်းပါတယ်။
အခြားတယောက်ကလည်း “ပေတရုဟာ ယေရှုရဲ့နောက်လိုက် တယောက်ပဲဟေ့” လို့ ဆိုတယ်။ ပေတရုက “မဟုတ်ဘူး။ ခရစ်တော်ကို ငါမသိဘူး။ နောက်လိုက်လည်း မဟုတ်ဘူး။” လို့ အခိုင်အမာ ငြင်းတယ်။
အမျိုးသမီးတယောက်က “ရှင်ဟာ သူ့ရဲ့တပည့်တယောက်ပါနော်၊ ရှင့်လေသံက သိသာပါတယ်ရှင်” လို့ ဆိုတယ်။ ပေတရုက “ငါ ယေရှုခရစ်ကို မသိဘူး။ သိလည်း မသိဖူးဘူး။” လို့ ကျိန်လိုက်တယ်။
သူကယ်တင်ခံရချိန်မှာ ခရစ်တော်ကို သခင်အဖြစ် ဆက်ကပ်ခဲ့ရင်တောင်၊ ငါ မသိဘူးလို့ ကျိန်လိုက်ချိန်မှာတော့ ဆက်ကပ်မှုဟာ ပျက်သွားပါပြီ။
ယောဟန် (၂၁) မှာ ပေတရုဟာ အမှုတော်ကို စွန့်ခွါသွားတယ်။ “ငါးဖမ်းသွားမည်” (အငယ် ၃) လို့ ပြောတယ်။ ဘယ်တော့မှ တရားမဟောတော့ဘူး လို့ ကြေငြာတာပါ။ နောက် ၆ယောက်လည်း သူနဲ့ လိုက်သွားကြတယ်။ လှေနဲ့အိုင်ထဲမှာ ရှိနေချိန်မှာ ဝတ်ရုံကိုချွတ်ပြီး တညလုံး ငါးဖမ်းနေတယ်။ သူကယ်တင်ခြင်းရချိန်မှာ သခင်ယေရှုကို သခင်အဖြစ် ဝန်ခံဆက်ကပ်ခဲ့ရင်တောင်မှ အခုတော့ အပြည့်အဝ မဆက်ကပ်တော့ဘူး။ အမှုတော်ကိုစွန့်လိုက်ပြီ။ တရားဟောဖို့ အားမထုတ်တော့ဘူး။ လဲနေတဲ့ သူ့စိတ်နှလုံးကို မီးအားဖြင့် နွေးထွေးဖို့ လုပ်တယ်။ တမန်တော် ၂ မှာ လူ ၃၀၀၀ ရဖို့ တရားမဟောခင်တုန်းကပေါ့။
အဲဒီလို ကယ်တင်ခြင်းရပြီးနောက် ဆက်ကပ်ပြီး ပျက်ပြယ်သွားရတဲ့ အခြား ဥပမာတွေ သမ္မာကျမ်းစာထဲမှာ အများကြီးရှိပါတယ်။
** ဆက်ပြီးတော့ ကယ်တင်ခြင်းရပြီးနောက်မှ ခရစ်တော်ထံ သူတို့ရဲ့အသက်တာကို ဆက်ကပ်အပ်နှံလာကြတဲ့ ယုံကြည်သူတွေလည်း ရှိပါတယ်။
တမန်တော် ၁၉) ထဲက အာတေမိနတ်သမီးကို ကိုးကွယ်တဲ့ ဧဖက်မြို့သားတချို့ဟာ ပြောင်းလဲခဲ့ကြတယ်။ သူတို့ဘာသာမှာ နတ်ဝိဇ္ဇာအတတ် သုံးဆောင်မှုတွေ ရှိပါတယ်။ ရှင်ပေါလုက အဲဒီမြို့မှာ ၂ နှစ် တရားဟောပြီးပြီ။ သူတို့လည်း ခရစ်တော်ကိုယုံကြည်ကြပြီ။ “ယုံကြည်သောသူအများတို့သည်လည်း လာ၍၊ မိမိတို့အကျင့်ကို ဘောာ်ပြလျက် တောင်းပန်ကြ၏။”း၁၈ ) သူတို့ထဲက အချို့ဟာ လွန်ခဲ့တဲ့ ၂ နှစ်ကတည်းက ယုံကြည်ခဲ့သူတွေပါ။ “နတ်ဝိဇ္ဇာအတတ်ကို သုံးဆောင်သောသူ အများတို့သည်လည်း မိမိတို့စာစောင်ကိုယူခဲ့၍ လူအပေါင်းတို့ရှေ့မှာ မီးရှို့ကြ၏။ စာစောင်အဘိုးကို ချင့်တွက်သော်၊ ငွေအသပြာ ငါးသောင်းထိုက်သည်ကို သိကြ၏။”း၁၉
ဒေါ်လာ ၉၃၀၀- လောက်တန်ဖိုးရှိတဲ့စာအုပ်တွေ မီးရှို့ပစ်ကြတယ်။ ခရစ်တော်ကို ကိုးစားပြီးလို့ (၂)နှစ်လောက်ရှိမှ စာအုပ်တွေ မိးရှို့ကြတာပါ။ ကယ်တင်ခြင်းရချိန်မှာ ခရစ်တော်ကို သခင်အဖြစ် ဝန်ခံ ဆက်ကပ်မှု မပြုပေမယ့် ကယ်တင်ခြင်း ရကြတယ်။
ခရစ်တော်ကို ကယ်တင်ရှင်အဖြစ် ကိုးစားပြီး နောက်နှစ်တွေရောက်မှ ဆေးလိပ်ဖြတ်ကြ၊ အကျင့်ဆိုးတွေရှောင်ကြတဲ့ ယုံကြည်သူတွေ အများကြီးရှိပါတယ်။ ကယ်တင်ခြင်းရပြီးမှ နောဧလို သောက်နေတဲ့သူတွေလည်း ရှိပါတယ်။ ကျွန်တော်က အပြစ်ဆိုတာကို ပေါ့ပျက်အောင် ပြောနေတာမဟုတ်ဘူး။ အဲဒီယုံကြည်သူတွေရဲ့ အသက်တာမှာ သခင်ယေရှုဟာ သခင်အဖြစ်ရှိမနေတာကို ရိုးရိုးကလေးဖော်ပြနေတာပါ။
ကယ်တင်ခြင်းရပြိး (၁)နှစ်ကြာမှ အကျင့်ဆိုးတွေ စွန့်တဲ့သူတွေလည်းရှိတယ်။ အချို့ဆိုရင် နှစ်ပေါင်းများစွာကြာမှ စွန့်တာပါ။ ဒါကြောင့် ကယ်တင်ခြင်းရချိန်မှာ ခရစ်တော်ကို သခင်အဖြစ် အပြည့်အဝ ဝန်ခံ ဆက်ကပ်ပြီး၊ ဆက်လက်အပြည့်အဝ ဆက်ကပ်နေတဲ့ ခရစ်ယာန်ဆိုတာ မရှိပါဘူး။
“သခင်အဖြစ်ဝန်ခံမှ ကယ်တင်ခြင်းရမယ်” လို့ သွန်သင်သူတယောက်က၊ ကျွန်တော့ကို ပြောတယ်။ “ကိုယ့်အသက်တာမှာ သခင်ယေရှုကို သခင်အဖြစ် ဝန်မခံရင် ကယ်တင်ခြင်းမရဘူး” တဲ့။ သူကယ်တင်ခြင်းရချိန်မှာ ခရစ်တော်ကို သခင်အဖြစ် ဝန်ခံ ဆက်ကပ်ခဲ့တယ်” တဲ့။ နောက်တော့ အဲဒီလူဟာ ခရစ်ယာန်တယောက်မဟုတ်တဲ့ အကျင့်စာရိတ္တကြောင့် သူ့ကို ခရစ်ယာန် အဖွဲ့အစည်းထဲက ထုတ်ပစ်တာ ခံရတယ်။
ကယ်တင်ခြင်းရဖို့ ပိုကောင်းအောင်လုပ်လို့ မရဘူး။ ပိုကောင်းအောင်သာ အကယ်ခံရကြတာပါ။ ကယ်တင်ခြင်းမရမချင်း ကောင်းမလာနိုင်ဘူး။ ကောင်းစရာအကြောင်းလည်း မရှိဘူး။ တမန် ၁၉ ထဲက အချို့ဟာ ခရစ်တော်ကို ကယ်တင်ရှင်အဖြစ် ကိုးစားချိန်မှာ အပြည့်အဝသခင်အဖြစ် ဝန်ခံ ဆက်ကပ်မှုမရှိဘူးဆိုတာ တွေ့ရတယ်။ (၂) နှစ်ကြာမှသာ စာအုပ်တွေ မီးရှို့ခဲ့ကြတယ်။ (၂) နှစ်ကြာမှပါ။ အဲဒီလူတွေဟာ သခင်အဖြစ်ဝန်ခံမှ ကယ်တင်ခြင်းရောက်မယ်ဆိုတဲ့ သွန်သင်ချက်နဲ့တော့ လုံးဝဆန့်ကျင်နေပါတယ်။
*** ခရစ်တော်ကို အသက်တာတလျှောက်လုံး သခင်အဖြစ် ငြင်းပယ်ခဲ့သူတယောက်ကို ဆက်ဖေါ်ပြပါမယ်။
ဓမ္မဟောင်းကျမ်းကိုဖတ်ကြည့်ရင် လောတ ကယ်တင်ခြင်းရတယ်ဆိုတာ ယုံနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ ဒါပေမယ့် “ထိုအခါ မတရားသောသူတို့၏ ညစ်ညူးသောအကျင့်အားဖြင့် နှောင့်ရှက်ခြင်းကိုခံရသောသူ၊ ဖြောင့်မတ်သော လောတကို ကယ်နှုတ်တော်မူ၏။ ထိုဖြောင့်မတ်သောသူသည် မတရားသောသူတို့တွင် နေစဉ်အခါ၊ သူတို့၏မတရားသော အမှုများကို နေ့တိုင်းမပြတ် မျက်စိမြင်လျက်၊ နားကြားလျက် ရှိသဖြင့်၊ မိမိဖြောင့်မတ်သောစိတ်နှလုံးကို ပြင်းစွာညှဉ်းဆဲရ၏။” ၂ပေ ၂း ၇ - ၈ အငယ်(၈)မှာ “ဖြောင့်မတ်သော” လို့ ၂-ခါ။ အငယ် ၇ မှာ “ဖြောင့်မတ်သော လောတ” လို့ ခေါ်ထားပါတယ်။
လောတ ကယ်တင်ခြင်းရတယ်။ ဖြောင့်မတ်တယ်ဆိုတာ (၂ပေ ၂း ၇ - ၈) အရ ရှင်းပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဓမ္မဟောင်းကျမ်းက လောတရဲ့အသက်တာကို ဖတ်ကြည့်ရင်တော့ သူကယ်တင်ခြင်းမရခင်ရော၊ ရပြီးမှရော။ ဘယ်တော့မှ ဘုရားသခင်ထံ ဆက်ကပ်မှုမရှိတာ ရှင်းနေပါတယ်။
သူ့ဦးလေး အာဗြံဟံထွက်လာတော့ သူလည်းလိုက်လာတာပဲရှိတယ်။ သူ့မှာ သိုးနွားတွေ များလာတော့ သူ့ကျွန်တွေက အာဗြံဟံရဲ့ ကျွန်တွေနဲ့ ရန်ဖြစ်ကြတယ်။ လမ်းခွဲဖို့ ဆုံးဖြတ်ကြတယ်။ အာဗြံဟံက လောတကို စိတ်ကြိုက်အရင်ရွေးခွင့် ပေးတယ်။ လောတက တောင်တွေကို မြော်ကြည့်တယ်။ ပြီးတော့ ရေများတဲ့ ယော်ဒန်ချိုင့်ကို မြော်ကြည့်တယ်။ သူသာ ဆက်ကပ်သူတယောက်ဖြစ်ခဲ့ရင် - - “ဦးလေးအာဗြံဟံ၊ ကျွန်တော် ဒီက ထွက်မသွားသင့်ဘူးထင်တယ်။ ဦးလေးရဲ့နောက်ကိုသာ လိုက်ရမှာပါ။ ဦးလေးရွေးရင်လည်း၊ ဦးလေးမယူချင်တဲ့ ကျန်တဲ့အပိုင်းကိုသာ ကျွန်တော်ယူမယ်။” လို့ ပြောရမှာပါ။ ဒါပေမယ့် ရေများတဲ့ ယော်ဟန်ချိုင့်ကို ရွေးယူတယ်။ သူဟာ ဆက်ကပ်တဲ့သူ မဟုတ်ပါဘူး။
သောဒုံမြို့ကိုရောက်တော့ သောဒုံမြို့သားတွေကို “ညီအကိုတို့” လို့ ခေါ်တယ်။ ဒါလည်း မဆက်ကပ်တာပါပဲ။ ကျမ်းစာကို လက်မခံ၊ မယုံကြည်သူကို “ခရစ်တော်၌ ညီအကို” လို့ခေါ်ရင် ဆက်ကပ်သူ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒီလို ခေါ်လိုက်ခြင်းက ကျမ်းစာနားမလည်ဘူးဆိုတာ ဖေါ်ပြနေပါတယ်။ ညီအကိုဆိုတာက ခရစ်တော်ကို ကယ်တင်ရှင်အဖြစ် လက်ခံသူကိုသာခေါ်ပါတယ်။ ယုံကြည်လို့သာ ဘုရားသားဖြစ်တယ်။ (ယော ၁း၁၂) သောဒုံမြို့သားတွေကို ညီအကိုလို့ခေါ်ချိန်မှာ သူ့ကို ဆက်ကပ်သူလို့ ထင်သလား။
ကောင်းကင်ဘုံက ကောင်းကင်၂-ပါးရောက်လာတော့ လောတက အိမ်ထဲကို ဖိတ်တယ်။ သောဒုံမြို့သား အကြီးအငယ်တွေဟာ လောတရဲ့အိမ်ကိုဝိုင်းပြီး၊ ဆူပူအော်ဟစ်ကြတယ်။ “ထိုသူတို့နှင့် ငါတို့သည် ဆက်ဆံလိုသည်ဖြစ်၍၊ ငါတို့ထံသို့ထွက်စေလော့ဟု ဆိုကြ၏။” (ကမ္ဘာ ၁၉း၅) သူတို့က ကောင်းကင်ကလာတဲ့ ကောင်းကင်တမန် ၂-ပါးကို ဆက်ဆံချင်ကြသတဲ့။ ဒါကြောင့် ယောက်ျားခြင်း ဆက်ဆံတာကို (sodomy) လို့ ခေါ်စမှတ်ပြုလာတယ်။
လောတက ဘာပြောမယ်ထင်သလဲ။ “အကျွန်ုပ်၌ ယောက်ျားနှင့် မဆက်ဆံသေးသော သမီးနှစ်ယောက်ရှိပါ၏။ သူတို့ကို သင်တို့ထံသို့ထုတ်ရသောအခွင့်ကို ပေးကြပါလော့။ သူတို့၌ ပြုချင်သမျှ ပြုကြပါလော့။ ဤလူတို့၌ အလျှင်းမပြုကြပါနှင့်။ အကြောင်းမူကား၊ သူတို့သည် အကျွန်ုပ်အိမ်မိုးအရိပ်ကို ခိုနေပါ၏။” တဲ့ ဒါက ဆက်ကပ်တဲ့ ခရစ်ယာန်ရဲ့ စကားလား။ လုံးဝမဟုတ်ဘူး။
လောတကို သောဒုံမြို့ကခေါ်ထုတ်ဖို့ ဘုရားသခင်က ကောင်းကင်တမန်တပါးကို စေလွှတ်ချိန်မှာ လောတနှောင့်နှေးနေတယ်။ သောဒုံက မခွါချင်ဘူး။ နောက်ဆုံးမှာ ကောင်းကင်တမန်က ကောင်းကင်က ကန့်နဲ့ မီးမိုးကျမလာခင် လောတကိုလက်ဆွဲပြီး သောဒုံမြို့က ခေါ်ထုတ်တယ်။
သူ့သားမက်တွေကိုခေါ်ထုတ်ဖို့ ကြိုးစားချိန်မှာ လှောင်ပြောင်ရယ်မောတာကို ခံရတယ်။ သူ့ရဲ့ စကားကို ရယ်ကြတယ်။
ဒါပေမယ့် သူ့အသက်တာက ပိုဆိုးလာတယ်။ ကောင်းကင်က ကန့်နဲ့မီးမိုး ကျမလာခင် သောဒုံမြို့က ထွက်ကြတယ်။ မိန်းမနဲ့ သမီးနှစ်ယောက် ပါလာတယ်။ သူ့မိန်းမက နောက်ပြန်ကြည့်လို့ ဆားတိုင် ဖြစ်ရတယ်။ လောတဟာ သမီးနှစ်ယောက်နဲ့အတူ ဂူထဲဝင်ပြီး စပျစ်ရည်သောက်တယ်။ ဂူထဲမှာ စပျစ်ရည် ရောင်းတဲ့ဆိုင် မရှိလောက်လို့၊ အဲဒီစပျစ်ရည်ဟာ သောဒုံမြို့ကမထွက်ခင် လောတယူလာတာ ဖြစ်တယ်။ စပျစ်ရည်သောက်စဉ် မှားယွင်းလို့ သမီးနှစ်ယောက်မှာ သားကိုယ်စီရကြတယ်။ လောတဟာ ခရစ်တော်ထံ မဆက်ကပ်၊ မအပ်နှံသူတယောက်ပါပဲ။ ဒါပေမယ့် သူကယ်တင်ခြင်းရတယ်ဆိုတာ (၂ပေ ၂း ၇ - ၈) အရ သိနိုင်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် (၁) ခရစ်တော်ကို ကိုးစားပြီးမှ၊ နောက်ပိုင်း ဆက်ကပ်မှု ပျက်ပြယ်သွားတဲ့ယုံကြည်သူ။ (၂) ခရစ်တော်ကို ကယ်တင်ရှင်အဖြစ်ကိုးစားပြီးမှ နောက်အတော်ကြာအောင် မဆက်ကပ်တဲ့ယုံကြည်သူနဲ့ (၃) ဘယ်တော့မှ မဆက်ကပ်တဲ့ ယုံကြည်သူဆိုပြီး ၃-မျိုးတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ လောတက အသက်တာမှာ ခရစ်တော်ထံ ဘယ်တော့မှ မဆက်ကပ်၊ မအပ်နှံသူပါပဲ။
သခင်အဖြစ်ဝန်ခံမှ ကယ်တင်ခြင်းရမယ် ဆိုတဲ့ အယူအဆ မှားကြောင်း ချေပနေတဲ့ ကျမ်းချက်များ
“သခင်အဖြစ်ဝန်ခံမှ” ဆိုတဲ့ သွန်သင်ချက်ကို သမ္မာကျမ်းအဖြစ်အပျက်တွေ သာမက ကျမ်းချက်တွေကလည်း ကန့်ကွက်နေပါတယ်။ “ယေရှုသည် သခင်ဘုရားဖြစ်တော်မူဟု သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်ကို အမှီမပြုလျှင်၊ အဘယ်သူမျှ မပြောနိုင်။” (၁ကော ၁၂း၃). ကယ်တင်ခြင်းမရမချင်း သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်ကို မရပါဘူး။ “ခရစ်တော်၏ ဝိညာဉ်ကိုမရသောသူ မည်သည်ကား ခရစ်တော်နှင့် မဆိုင်။ (ရောမ ၈း၉) ။ သင်တို့သည် သားဖြစ်သောကြောင့် အဗ္ဗ အဘဟု ခေါ်တတ်သော သားတော်၏ ဝိညာဉ်တော်ကို သင်တို့စိတ်နှလုံးထဲသို့ ဘုရားသခင်စေလွှတ်တော်မူ၏။” (ဂလာတိ ၄း၆) . ယောဟန် ၃း၆ မှာလည်း ယုံကြည်သူကို “ဝိညာဉ်တော်မွေးသောသူ” လို့ ခေါ်ထားပါတယ်။ ယုံကြည်သူဟာ ဝိညာဉ်တော်ရဲ့ တံဆိပ်ခတ်ခြင်းခံရတယ်။ (ဧဖက် ၄း၃၀) သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်မပါပဲ သခင်ယေရှုကို သခင်လို့ မခေါ်နိုင်ရင်၊ ပြီးတော့ ကယ်တင်ခြင်းရဖို့လည်း သခင်လို့ခေါ်ရဦးမယ်။ ဝိညာဉ်တော်မပါပဲလည်း ကယ်တင်ခြင်းမရဘူးဆိုရင်၊ အဲဒါ ပြဿနာပဲ။
ရောမဩဝါဒစာဟာ ကယ်တင်ခြင်းအကြောင်းရေးထားတာပါ။ ရောမ(၃) မှာ လူတိုင်း ကယ်တင်ခြင်းရဖို့ လိုတယ်လို့ ဆိုတယ်။ ဘုရားသခင်က လူကို ကြည့်တော်မူတဲ့အခါ၊ “သူတို့၏လည်ချောင်းသည် ဖွင့်ထားသောသင်္ချိုင်းတွင်းဖြစ်၏။ သူတို့သည် လျှာနှင့်လှည့်စားတတ်ကြ၏။ သူတို့နှုတ်ခမ်းအထဲမှာ မြွေဆိုး အဆိပ်အတောက်ရှိ၏။ သူတို့နှုတ်သည် ကျိန်ဆဲသောစကား၊ ကြမ်းတမ်းသောစကားနှင့် ပြည့်ဝ၏။ သူတို့ခြေသည် လူ့အသက်ကိုသတ်ခြင်းငှါ လျင်မြန်၏။ သူတို့သွားရာလမ်း၌ ပျက်စီးခြင်း၊ ဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းရှိ၏။” (ရောမ ၃း၁၃-၁၆ ) ဦးခေါင်းကနေ ခြေဖဝါးအထိ ဖေါ်ပြထားပြီး၊ လူဟာ လုံးဝပျက်စီးနေတယ်လို့ မိန့်တော်မူပါတယ်။ “ဖြောင့်မတ်သောသူမရှိ၊ တယောက်မျှမရှိ။” ရောမ ၃း၁၀) “ အဘယ့်ကြောင့်နည်းဟူမူကား၊ လူအပေါင်းတို့သည် ဒုစရိုက်ကိုပြု၍ ဘုရားသခင်ရှေ့တော်၌ အသရေပျက်ကြပြီ။” ရောမ ၃း၂၃) ဒါကြောင့် ရောမအခန်းကြီး ၃ က လူတိုင်း ကယ်တင်ခြင်းရဖို့လိုတယ် လို့ ဖေါ်ပြနေပါတယ်။
ရောမအခန်းကြီး ၄ ကတော့ ကယ်တင်ခြင်းမရောက်နိုင်တဲ့ နည်း ၃ နည်း ပေးထားပါတယ်။
(၁) အကျင့်အားဖြင့် မရနိုင်ဘူး။ (အငယ် ၁-၄)
(၂) ဝိနည်းအထုံးအဖွဲ့တွေ စောင့်ထိန်းလို့ မရနိုင်ဘူး။ (း၉ -၁၂)
(၃) ပညတ်တရား စောင့်ထိန်းခြင်းအားဖြင့် မရောက်နိုင်ဘူး။ (း ၁၃-၁၂)
ရောမအခန်းကြီး ၅ ကတော့ ကယ်တင်ခြင်းရောက်နိုင်တဲ့ တခုတည်းသော နည်းလမ်းကို ပြောပြနေပါတယ်။ “ငါတို့သည် ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် ဖြေင့်မတ်ရာသို့ရောက်လျှင် - - -” (အငယ် ၁) ဘာအားဖြင့် ဖြောင့်မတ်ရာ ရောက်သလဲ။ ဆက်ကပ်ခြင်းအားဖြင့်လား၊ အပ်နှံခြင်းအားဖြင့်လား။ အသက်တာမှာ သခင်ယေရှုကို သခင်အဖြစ် ဝန်ခံနေခြင်းအားဖြင့်လား။ မဟုတ်ပါဘူး။ ယုံကြည်အားဖြင့်သာ ဖြောင့်မတ်ရာသို့ ရောက်ပါတယ်။
ရောမ အခန်းကြီး-၁၂ က ကယ်တင်ခြင်းရပြီးသူတွေကို ရေးတာပါ။ အငယ်.၁ မှာ “ညီအကိုတို့၊ အသက်ရှင်ခြင်းလက္ခဏာ၊ သန့်ရှင်းခြင်းလက္ခဏာ၊ ဘုရားသခင် နှစ်သက်တော်မူဘွယ်သော လက္ခဏာနှင့် ပြည့်စုံသောယဇ်ကို သင်တို့သည်ပူဇော်၍၊ မိမိကိုယ်ခန္ဓာကို ဘုရားသခင်အား ဆက်ကပ်ခြင်းတည်းဟူသော သင်တို့ပြုအပ်သော ဝတ်ကိုပြုမည်အကြောင်း၊ ဘုရားသခင်၏ ဂရုဏာတော်ကို ထောက်ထား၍၊ သင်တို့ကို ငါ တိုက်တွန်းနှိုးဆော်ပေ၏။”
ရှင်ပေါလုက “ညီအကိုတို့” လို့ခေါ်တာကို သတိပြုပါ။ အဓိပ္ပါယ်က သူတို့ ကယ်တင်ခြင်းရပြီးသူတွေပါ။ အဘ တပါးတည်းရဲ့သားတွေ၊ ညီအကိုတွေ ဖြစ်ပါပြီ။ ဒီညီအကိုတွေသာ ယေရှုခရစ်တော်ကို ကယ်တင်ရှင်အဖြစ်နဲ့ ကိုးစားခဲ့ကြသူတွေပါ။ “ထိုသူကို လက်ခံသမျှသောသူတည်းဟူသော ကိုယ်တော်ကို ယုံကြည်သောသူတို့အား၊ ဘုရားသခင်၏သားဖြစ်ရသောအခွင့်ကို ပေးတော်မူ၏။” (ယော ၁း၁၂) သခင်ယေရှုကို ကယ်တင်ရှင်အဖြစ် ကိုးစားကြ၊ လက်ခံကြသူတိုင်းဟာ ဘုရားသား ဖြစ်ပါပြီ။ ဒါကြောင့် ကယ်တင်ရှင်ကို ကိုးစားသူတွေနဲ့ ညီအကိုဖြစ်ရပါတယ်။
ရှင်ပေါလု စာရေးလိုက်တဲ့သူတွေဟာ ဒုတိယမွေးဖွားပြီးတဲ့ ယုံကြည်သူတွေ (born- again believers) ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဆက်ကပ်မှုမရှိတဲ့သူတွေမို့၊ သူတို့ ကိုယ်ခန္ဓာကို အသက်ရှင်တဲ့ယဇ်အဖြစ် ဘုရားသခင်ကို ဆက်ကပ်ပူဇော်ဖို့ ရှင်ပေါလုက ဘုရားသခင်ရဲ့ ဂရုဏာတော်ကို ထောက်ထားပြီး တောင်းပန်နေတာပါ။
အချို့ကလည်း ကျမ်းစာကပြောတယ်လေ။ “ငါ၌ ဆည်းကပ်လိုသောသူဖြစ်လျှင် ကိုယ်ကိုကိုယ် ငြင်းပယ်ရမည်။ ကိုယ်လက်ဝါးကပ်တိုင်ကို ထမ်း၍ ငါ့နောက်သို့ လိုက်ရမည်။” (မဿဲ ၁၆း၂၄) ထာဝရဘုရားကို စိတ်နှလုံးအကြွင်းမဲ့၊ ကိုယ်စွမ်းရှိသမျှ၊ ဥာဏ်စွမ်းရှိသမျှ ချစ်ရမယ်။ ကိုယ့်မိဘနဲ့ ရှိသမျှကိုမမုန်းရင် တပည့်မဖြစ်နိုင်ဘူး။ ကျမ်းစာက ရှိသမျှမစွန့်ရင် တပည့်တော်မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ ပြောတယ်လေ လို့ ဆိုတတ်ကြပါတယ်။ (လုကာ ၁၄း၃၃)
မှန်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျမ်းစာက “ငါ့တပည့်မဖြစ်နိုင်ကြ” လို့ဘဲ ပြောတာပါ။ “ကောင်းကင်နိုင်ငံမဝင်ရ” လို့ မပြောပါဘူး။ ကယ်တင်ခြင်းရဖို့ လိုအပ်ချက်နဲ့ တပည့်တော်ဖြစ်ဖို့ လိုအပ်ချက်ကို ရောထွေးမပစ်ပါနဲ့။ တပည့်တော်တိုင်းဟာ ယုံကြည်သူတွေပါ။ ဒါပေမယ့် ယုံကြည်သူတိုင်းဟာ တပည့်တော်မဟုတ်ဘူး။ တပည့်တော်ဆိုတာက သွန်သင်မှုကို ခံယူနေတဲ့ တပည့်တယောက်ပါ။
ဘုရားသခင်ဟာ ကယ်တင်ခြင်းမရသေးတဲ့သူ၊ ဘယ်သူကိုမှ “ ကယ်တင်ခြင်းရဖို့ ငါ့နောက်သို့ လိုက်ခဲ့ကြ” လို့ မပြောဘူး။ “ဝန်လေး၍ ပင်ပန်းသောသူအပေါင်းတို့ ငါ့ထံသို့လာကြလော့။ ငါသည် ချမ်းသာပေးမည်” လို့သာ ပြောပါတယ်။ ခရစ်တော်ကို ကယ်တင်ရှင်အဖြစ်လက်ခံပြီးရင်တော့ “ငါ့နောက်သို့ လိုက်ကြလော့။ သင်တို့သည် လူကိုမျှားသောတံငါဖြစ်ခြင်းငှါ ငါပြုမည်”လို့ ပြောတယ်။ (မဿဲ ၄း၁၉) ကယ်တင်ခြင်း ရဖို့ ကိုယ်တော်ထံလာရမယ်။ တပည့်တော်ဖြစ်ဖို့ ကိုယ်တော့နောက် လိုက်ရမယ်။
သခင်ယေရှုကို ကယ်တင်ရှင်အဖြစ် ကိုးစားတာက တပိုင်း။ သခင်အဖြစ် ဝန်ခံတာက တပိုင်းပါ။ ဆက်ကပ်တဲ့ ခရစ်ယာန်တွေ ရှိသလို၊ ဘယ်တော့မှ အသက်တာ မဆက်ကပ်တဲ့ ဇာတိခရစ်ယာန်တွေလည်း ရှိပါတယ်။ (၁ကော၃) အသက်တာတခုလုံး ဆက်ကပ်ခြင်း (သို့) အသက်တာမှာ သခင်ယေရှုကို သခင်အဖြစ်ခံယူတာဟာ ကယ်တင်ခြင်းအတွက် မရှိမဖြစ်မလိုဘူး။ လိုတယ်လို့ပြောရင် သခင်အဖြစ်ဝန်ခံမှ ကယ်တင်ခြင်းရမယ်လို့ သွန်သင်ခြင်းပါပဲ။ မှောက်လှန်တဲ့ ဧဝံဂေလိပေါ့။
“သခင်အဖြစ်ဝန်ခံမှ”ကို သက်သေပြရန် ကြိုးစားသူတွေရဲ့ ငြင်းဆိုချက်အချို့
သူတို့က ကျမ်းစာကပြောတယ်လေ။ “သခင်ယေရှုခရစ်ကို ယုံကြည်လော့။ ယုံကြည်လျှင် သင်နှင့် သင်၏အိမ်သူအိမ်သားတို့သည် ကယ်တင်ခြင်းသို့ ရောက်ကြလိမ့်မည်။” (တမန် ၁၆း၃၁) မှန်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် “သခင်ယေရှုကို နာခံမှပါ။ နာခံရင် သင်ကယ်တင်ခြင်းရောက်လိမ့်မယ်” လို့ မပြောဘူး။ အသက်တာရဲ့ သခင်ဟာ သခင်ယေရှုဖြစ်ပါစေ။ ဖြစ်ရင် ကယ်တင်ခြင်းရောက်လိမ့်မယ်”လို့ မပြောဘူး။ ရိုးရိုးကလေးပြောနေတာက “သခင်ယေရှုခရစ်ကို ယုံကြည်လော့” အပြစ်သားကို လုပ်ခိုင်းနေတာက “ယုံကြည်ဖို့ပါပဲ။ သူယုံရမယ့်သူက သခင်ယေရှု။ ကျမ်းစာက “ယုံပါ။ ယုံရင် ကယ်တင်ခြင်းရမယ်”လို့ မပြောပါဘူး။ ဘာကိုယုံတယ်ဆိုတာ သတိပြုရမယ်။ ကျွန်တော်တို့ ယုံကြည်ကိုးစား၊ မှီခိုတာဟာ သခင်ယေရှုခရစ်သာ ဖြစ်ရပါမယ်။
ကောင်းမှုကုသိုလ်၊ ကောင်းတဲ့အသက်တာ၊ ဆက်ကပ်မှု၊ နှစ်ခြင်းမင်္ဂလာနဲ့ အခြားလိုက်နာတဲ့ ဝတ်နည်းတွေကို ကိုးစားလို့မဖြစ်ဘူး။ ကယ်တင်ခြင်းအတွက် ယေရှုခရစ်တော်တပါးတည်းကိုသာ ကိုးစားရမယ်။ ရှင်းရှင်းကလေး မိန့်တော်မူတာက “ငါသည် လမ်းခရီးဖြစ်၏။ သမ္မာတရားလည်းဖြစ်၏။ အသက်လည်းဖြစ်၏။ ငါ့ကို အမှီမပြုလျှင် အဘယ်သူမျှ ခမည်းတော်ထံသို့ မရောက်ရ။” ယော ၁၄း၁၆
လောကမှာ အရေးကြီးဆုံးသတင်းစကားကို ဘာကြောင့် ရှုပ်ထွေးစေချင်ကြတာလဲ။
မီးလောင်နေတဲ့ အဆောက်အဦးထဲကနေ လူ၎-ယောက် ကိုင်ထားတဲ့ ပိုက်ထဲကို ခုန်ချတော့မယ်ဆိုပါစို့။ စက်မှုအင်ဂျင်နီယာက တစ၊ သွားဆရာဝန်က တစ၊ လေယာဉ်မောင်းသူက တစ၊ အသက်အာမခံဌာနက ပုဂ္ဂိုလ်က တစ၊ ပိုက်ကို ကိုင်ထားတယ် ဆိုပါစို့။
ကျွန်တော့ကို ဖမ်းထားဖို့ သူတို့ကို အားကိုးရမယ်။ သွားဆရာဝန် Dr. Domansky ကိုယုံရင် မင်းအကယ်ခံရမယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီစကားဟာ “အကယ်ခံရဖို့ ကျွန်တော့ရဲ့ ရှိသမျှသွားတွေ သူ့ကိုနှုတ်ခွင့်ပြုရင် အကယ်ခံရမယ်”လို့ ပြောတာမဟုတ်ဘူး။ ကျွန်တော့ကို ဖမ်းထားဖို့ သူ့ကို အားကိုးရမယ်လို့သာ ဆိုလိုပါတယ်။ တယောက်ကလည်း “အသက်အာမခံဌာနက Mr. Smith ကိုယုံရင် အကယ်ခံရမယ်။” ဒါပေမယ့် ဒီစကားက ကျွန်တော်အကယ်ခံရဖို့ Mr. Smithဆီမှာ အသက်အာမခံ သွားလုပ်ထားရမယ်”လို့ ပြောတာမဟုတ်ဘူး။ ပိုက်နဲ့ဖမ်းထားဖို့ သူ့ကို အားကိုးရမယ်လို့သာ ဆိုလိုပါတယ်။
“သခင်ယေရှုခရစ်ကို ယုံကြည်လော့။”(တမန် ၁၆း၃၁) လို့ ပြောတာက သခင်အဖြစ် ဝန်ခံဖို့ပြောတာ မဟုတ်ဘူး။ ကယ်တင်ခြင်းရဖို့ သခင်ယေရှုကို ကိုးစားရမယ်လို့ ဆိုလိုတာပါ။ ကျမ်းချက်တွေက တပိုဒ်ပြီးတပိုဒ် သခင်ယေရှုကို ကိုးစားခြင်းအားဖြင့်သာ ကယ်တင်ခြင်း ရတယ်လို့ ရှင်းရှင်းလေး ပြောနေပါတယ်။ “သားတော်ကို ယုံကြည်သောသူသည် ထာဝရအသက်ကိုရ၏။ သားတော်ကို ပယ်သောသူမူကား အသက်ကို မတွေ့ရ။ ထိုသူ၏အပေါ်၌ ဘုရားသခင်၏အမျက်တော်တည်နေသည်။”ယော ၃း၃၆
ယေရှုခရစ်ထက် အခြားအရာတခုခုကို ကိုးစားသူဟာ ကယ်တင်ခြင်းမရသေးဘူး။ ဒါဟာ ကျမ်းစာက ရှင်းရှင်းကလေး သွန်သင်နေတဲ့အချက်ပါ။ ယေရှုခရစ်ကို ကိုးစားရာမှာ ခရစ်တော်ကို သခင်အဖြစ် နေရာပေးမယ်ဆိုတဲ့ သူ့ရဲ့အစွမ်းအစကို ပေါင်းထည့်ရင် ကယ်တင်ရှင်ကို အပြည့်အဝ ကိုးစားသူမဟုတ်ဘူး။ အခြားအရာတွေ ဘယ်လောက်ကောင်းနေပါစေ။ ယေရှုခရစ်တော်ကို ကိုးစားတာနဲ့ပေါင်းပြီး ကိုးစားနေရင်၊ သူ့အတွက် ဘာဂတိတော်မှ မရှိပါဘူး။
ကျွန်တော်တို့ ကောင်းကင်ရောက်ရင် “ကိုယ်တော်သည် အသေသတ်ခြင်းကို ခံတော်မူသောအားဖြင့်၊- - - လူအမျိုးအနွယ် ခပ်သိမ်းတို့အထဲမှ အကျွန်ုပ်တို့ကိုယူ၍၊ အသွေးတော်နှင့် ဘုရားသခင်အဘို့ ရွေးနှုတ်တော်မူ၏။ - - ထို့ကြောင့် ကိုယ်တော်သည် စာစောင်ကိုခံယူ၍ တံဆိပ်တို့ကို ဖွင့်လိုက်တော်မူ၏။”လို့ အသစ်သောသီချင်းကို ဆိုကြရမှာပါ။ (ဗျာ ၅း၉) “ကျွန်တော်ဆက်ကပ်လို့ ကျွန်တော်ထိုက်ပါတယ်။”လို့ ဆိုရမှာ မဟုတ်ဘူး။ ယုံကြည်လို့ ကျေးဇူးတော်ကြောင့် ကယ်တင်ခြင်းရတယ်။ အားကိုးရင် ရတယ်လို့ပြောရင်- အချို့က easy believism (လွယ်လွယ်ယုံကြည်တဲ့တရား) လို့ ဆိုကြလိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့် ကျမ်းစာက ဒီလိုနာမည်မပေးဘူး။ လူတွေပေးတာပါ။
ကယ်တင်ခြင်းရဖို့ တခြားဘာကိုမှမကိုးစားဘဲ ယေရှုခရစ်တပါးတည်းကိုသာ ကိုးစားဖို့ရာ မလွယ်လှပါဘူး။ ဒါကြောင့် လောကမှာလုပ်ဆောင်ဖို့ အခက်ဆုံးဖြစ်နေပါတယ်။
တခါမှမမြင်ဖူးတဲ့သူကို ယုံခိုင်းနေပါတယ်။ ကိုယ်တော့ကို မြင်ဖူးခဲ့တဲ့သူတွေကိုတောင် မမြင်ဖူးဘဲနဲ့ ယုံကြည်ခိုင်း နေရတာပါ။ ခေတ်ပညာက ငြင်းပယ်နေတဲ့သူကို ယုံခိုင်းနေတာပါ။ လွန်ခဲ့တဲ့ အနှစ် ၂၀၀၀-လောက်က ကားတိုင်မှာ အသေခံခဲ့သူကို ယုံခိုင်းနေတာပါ။ သူ့အကြောင်း သူ့မိတ်ဆွေတွေ ရေးသား မှတ်တမ်းတင်ထားတာပဲ ရှိတဲ့သူကို ယုံခိုင်းနေတာပါ။ ကိုယ်တော်ရှိတယ်လို့ ယုံခိုင်းရုံသာမဟုတ် သင့်အပြစ်အတွက် အသေခံပေးဆပ်ခဲ့လို့၊ သင်ဖြောင့်မတ်နိုင်ကြောင်း ယုံခိုင်းနေတာပါ။
မလွယ်လှပါဘူး။ တွေ့နေ မြင်နေကျ လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ပြီး စကားပြောနေသူကိုတောင် အားကိုးဖို့ ခက်ပါတယ်။ မမြင်ဖူးတဲ့သူကို အားကိုးရမယ်ဆိုတာ့ ပိုခက်တာပေါ့။ ဘာသာတရားတွေက အကျင့် ဝိနည်းအထုံးအဖွဲ့၊ နှစ်ခြင်းမင်္ဂလာနဲ့ အခြားအရာတွေကို အားကိုးဖို့ ပြောနေချိန်မှာ ယေရှုခရစ်ကို ကယ်တင်ရှင်အဖြစ် အားကိုးဖို့ရာ ခက်လှပါတယ်။
ကျေးဇူးတော်ကြောင့် ကယ်တင်ခြင်းရတာဟာ Believism (ယုံကြည်ခြင်းတရား) ပါ။ ဒါပေမယ့် easy believism (လွယ်လွယ်ယုံကြည်ခြင်းတရား) တော့မဟုတ်ဘူး။ နားလည်လွဲမသွားပါနဲ့။ ခရစ်တော်ရှိတယ်ဆိုတာ ဝန်ခံရင် ကယ်တင်ခြင်းရမယ်လို့ ပြောနေတာမဟုတ်ဘူး။ ကျမ်းစာအတိုင်း ပြောခြင်းပါ။ “သခင်ယေရှုခရစ်ကို ယုံကြည်လော့။ ယုံကြည်လျှင် သင်နှင့် သင်၏အိမ်သူအိမ်သားတို့သည် ကယ်တင်ခြင်းသို့ ရောက်ကြလိမ့်မည်။”
ကျမ်းစာထဲက ယုံကြည် believe ဆိုတဲ့စကားဟာ ကိုးစားတယ်၊ အားကိုးတယ်၊ မှီခိုတယ် လို့ အဓိပ္ပါယ်ရတယ်။ အချို့က “နတ်ဆိုးတို့သည် ယုံ၍ ကြောက့်ရွံကြ၏။” လို့ ယာကုပ် ၂း၁၉) အရ ငြင်းကြတယ်။ နတ်ဆိုးတွေက ကိုးစားတာမဟုတ်ဘူး။ ရှိကြောင်း ဝန်ခံရုံပါ။
လေယာဉ်ပျံ ပျံမယ်လို့ ယုံတာကတပိုင်း၊ ခရီးစဉ်မှာ အသက်နဲ့ ခန္ဓာအတွက် မောင်းသူအပေါ်မှာ အားကိုးတာက တပိုင်းပါ။ လူတယောက် ကယ်တင်ခြင်းရဖို့ သူဟာ သခင်ယေရှုကို အပြည့်အဝ အားကိုးရတယ်။
ကမ္ဘာပေါ်မှာ ဘယ်ခရစ်ယာန်ကမှ “ကျွန်တော် ကယ်တင်ခြင်းရတုန်းက ခရစ်တော်ကို လုံးဝ ကိုးစားပြီး အခုလည်း အပြည့်အဝဆက်ကပ်နေဆဲပါပဲ။” လို့ မပြောနိုင်ဘူး။ “သခင်အဖြစ် ဝန်ခံမှ”လို့ ဆိုသူတွေတောင် မပြောနိုင်ဘူး။ ပြောနိုင်တာက “သခင်ယေရှုဟာ ကျွန်တော့ရဲ့သခင်ဖြစ်ခဲ့တယ်။ ဒါပေမယ့် သူ့စကားကို အတော်များများ မနာခံမိခဲ့ဘူး။”ဆိုတာပါပဲ။ မနာခံချိန်မှာ ကိုယ်တော်ဟာ အသက်တာရဲ့ သခင် မဟုတ်တော့ဘူး။
တချို့က “ကိုယ်တော်က အမြဲတမ်းသခင်ပါ”လို့ ဆိုတယ်။ Lord သခင်ဆိုတာ ဟေဗြဲစကား Adanion ကလာပါတယ်။ Master ဆရာ၊ သခင် လို့ ဆိုလိုတယ်။ ဘုရားသခင်ရဲ့ ကိုယ်ပိုင်နာမတော် “ယေဟောဝါ” Jehovah ကလည်း လာတယ်။ ဒီစကားကို အခါများစွာ ပြန်ဆိုထားတာတွေ့ရမယ်။ ဒါကြောင့် ကိုယ်တော်က လူတိုင်းရဲ့သခင်ပါ။ ဖားလောင်းကလေးတွေရဲ့ သခင်၊ ပတုံးကလေးတွေ၊ ဖားပြုပ်ကလေးတွေရဲ့ သခင်၊ မြွေဆိုးတွေရဲ့ သခင်ပါ။ ဒါပေမယ့် သူတို့ ကယ်တင်ခြင်းရတယ်လို့ ဆိုလို့မရဘူး။ ကိုယ်တော်က စင်္ကြဝဠာတခုလုံးရဲ့ သခင်ပါ။ အလိုတော် ရှိသလို စိတ်ကြိုက်လုပ်ဆောင်နိုင်တယ်။
(ခပ်သိမ်းသောသတ္တဝါတို့သည် ယေရှု၏ဘွဲ့နာမတော်ကို ဒူးထောက်၍ ယေရှုခရစ်သည် သခင်ဖြစ်တော်မူ၏ ဟု နှုတ်နှင့်ဝန်ခံသဖြင့် ခမည်းတော်ဘုရား၏ ဘုန်းအသရေတော်ကို ထင်ရှားစေကြမည့် အကြောင်းတည်း။) ဖိလိပ္ပိ ၂း၁၀- ၁၁ အားလုံး ဒူးထောက်ဝန်ခံကြတဲ့နေ့မှာ အားလုံးကယ်တင်ခြင်းရမယ်လို့ ဆိုလိုပါသလား။ မဟုတ်ဘူး။ သခင်အဖြစ်ဝန်ခံတယ်ဆိုတာက အသက်တာကို ကိုယ်တော် ထိန်းချုပ်ဖို့ အပ်နှံတယ်လို့ ဆိုလိုတယ်။
သခင်ယေရှုဟာ ကျွန်တော့မှာရှိသမျှရဲ့ သခင်ပါ။ မျက်လုံးအရောင်၊ အရပ်အမောင်း၊ မိဘများ. . စသည်ဖြင့်ပေါ့။ မျက်လုံးရဲ့အရောင် ဘာအရောင်ဖြစ်မလဲဆိုတာ ကိုယ်တော် ဆုံးဖြတ်ပါတယ်။ ဘယ်သူတွေ ကျွန်တော့ မိဘဖြစ်မယ်ဆိုတာ ကိုယ်တော်ဆုံးဖြတ်ပါတယ်။ ကိုယ်တော်ဟာ သခင်ပါ။ ကျွန်တော့အရပ်လည်း ကိုယ်တော်စီရင်ရာပါပဲ။ နားရွက် အရွယ်အစား၊ နှာခေါင်း အသားအရေကိုလည်း ကိုယ်တော်စီရင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော့ကို ထိန်းချုပ်ဖို့ အရေးအကြီးဆုံး အစိတ်အပိုင်းကတော့ ကျွန်တော့စိတ်ဆန္ဒ will ပါပဲ။ ဘုရားသခင်က လွတ်လပ်စွာပြုမူနိုင်တဲ့ သတ္တဝါအဖြစ် ဖန်ဆင်းထားတာပါ။ ရွေးချယ်ခွင့်ရှိတယ်။ ကိုယ်တော်က ကျွန်တော်တို့စိတ်ဆန္ဒရဲ့သခင် ဖြစ်ချင်တယ်။ ဒါပေမယ့် အတင်းအဓမ္မတော့ မဖြစ်ခိုင်းဘူး။ ဆက်ကပ်ချင်ရင်တော့ ဆက်ကပ်စေဖို့ အလိုတော်ရှိပါတယ်။
ကိုယ်တော်ဟာ စေတနာပါတဲ့ ကယ်တင်ရှင်ပါ။ စေတနာပါတဲ့ ကျွန်တွေကိုသာ အလိုရှိတယ်။ ကယ်တင်ခြင်းရဖို့ ကိုယ်တော်ကို ကိုးစားရမယ်။ အမှုတော်အတွက် ကိုယ်တော်ထံ ဆက်ကပ်ရမယ်။
ယုံကြည်သူတွေကို ရှုပ်ထွေးစေတဲ့ “သခင်အဖြစ်ဝန်ခံမှ” ဆိုတဲ့ သွန်သင်ချက်များ
သူတို့ရဲ့ဝတ်ပြုစည်းဝေးမှာ တရားဟောဆရာ ၃၊ ၄ ယောက် ကယ်တင်ခြင်းရတယ်လို့ ကြွားတာ ကြားဖူးတယ်။ တချို့ကလည်း လူငယ်သင်းအုပ်နဲ့ သင်းထောက်၃ ယောက် ကယ်တင်ခြင်းရတယ်လို့ ဆိုတယ်။ ကျွန်တော်ကတော့ ကယ်တင်ရှင်အဖြစ် အားကိုးသူတိုင်းအတွက်လို့ပဲ ဟောပါတယ်။ ယုံကြည်သူတွေကို ရှုပ်ထွေးသွားစေတဲ့ သွန်သင်မှုတွေကို ကျွန်တော်ဆန့်ကျင်ပါတယ်။
“သခင်အဖြစ်ဝန်ခံမှ”ဆိုတဲ့ တရားတပုဒ်ကို ကြားပြီးမှ ကယ်တင်ခြင်းရတာလို့ ထင်မိတဲ့ လူငယ်ခေါင်းဆောင် တယောက်အကြောင်း ကြားရတယ်။ သူအမှုတော်ဆောင်လို့ ခရစ်တော်ကို ကယ်တင်ရှင်အဖြစ် အားကိုးသူတွေဟာ သူတို့ကယ်တင်ခြင်းမရသေးဘူးထင်လို့ ရှေ့ထွက်လာကြတယ်။ ဧဝံဂေလိဆရာက “အခုမှ တကယ် ကယ်တင်ခြင်းရောက်ပြီ”လို့ ဆိုပါသတဲ့။
ကယ်တင်ခြင်းရတာနဲ့ တကယ်ကယ်တင်ခြင်းရတာ ဘာမှမကွာပါဘူး။ ကယ်တင်ခြင်းမှာ အဆင့်အတန်း မခွဲဘူး။ ပိုပြီးကယ်တင်ခြင်းခံရတာ မရှိဘူး။ “သားတော်ကိုယုံကြည်သောသူသည် ထာဝရအသက်ကို ရ၏။ သားတော်ကို ပယ်သောသူမူကား အသက်ကိုမတွေ့ရ။ ထိုသူ၏အပေါ်၌ ဘုရားသခင်၏အမျက်တော် တည်နေသည်။” (ယော ၃း၃၆) ဒီထက်ရှင်းတာ မရှိတော့ပါဘူး။ ယေရှုခရစ်ကို ကယ်တင်ရှင်အဖြစ် ကိုးစားသူ ကယ်တင်ခြင်းရတယ်။ ထာဝရအသက်ရတယ်။ မကိုးစားသူတွေ ကယ်တင်ခြင်းမရဘူး။ ဘုရားသခင်ရဲ့အမျက်တော် တည်နေပါတယ်။
တကယ်ကယ်တင်ခြင်း ခံရတယ်။ really saved လို့ ပြောတာဟာ အသုဘအိမ်သွားပြီး၊ ခေါင်းတခုကို လက်ညှိုးထိုးရင်း “ဒီခေါင်းထဲကလူကတော့ သေပြီ။”နောက် ခေါင်းတခုကို ပြပြီး “ဒီခေါင်းထဲက လူကတော့ တကယ်သေပြီ” လို့ ပြောတဲ့သူနဲ့ တူပါတယ်။ သေတယ်၊ ပိုသေတယ်၊ အသေဆုံးလို့ မရှိပါဘူး။
သေရင်သေ။ မသေရင် ရှင်။ ကယ်တင်ခြင်းရရင် ရ။ မရရင် ဆုံးရှုံး။ အပြစ်သား(သို့) ဖြောင့်မတ်သူ။ ယုံကြည်သူ (သို့) မယုံကြည်သူ- ပါပဲ။ ကြားနေ အရပ်မရှိဘူး။ ဘာကြောင့် ခရစ်ယာန်ကောင်းတွေက “သခင်အဖြစ် ဝန်ခံမှ”တရားကို ကြားပြီးမှ တကယ် ကယ်တင်ခြင်းရတယ် လို့ ထင်ကြသလဲ။ တရားဟောဆရာကို ယုံလို့ပါ။ ကယ်တင်ခြင်းရောက်ဖို့ သခင်အဖြစ် ဝန်ခံအသက်ရှင်မှ ဆိုရင် ဒီတရားဟောတိုင်း ရှေ့ထွက်ပြီး ကယ်တင်ခြင်း ရနေရတော့မှာပဲ။ ဘာကြောင့်လဲဆိုရင် ကျွန်တော်မနာခံတဲ့ အချိန်တွေ၊ ဇာတိအလိုလိုက်မိတဲ့ အချိန်တွေ ရှိနေလို့ပါပဲ။
ပြဿနာက “တကယ် ကယ်တင်ခြင်းရတယ်”ဆိုတဲ့သူတွေဟာ နောက်ပိုင်းမှာ စုံလင်စွာ အသက်မရှင်နိုင်တဲ့အတွက် ပြဿနာ ဖြစ်လာတယ်။ အသွေးအသားအလိုကို လိုက်မိတဲ့ အချိန်တွေ ရှိဦးမှာ ဆိုတော့၊ နောက်ပြီး တရားဟောဆရာကလည်း “သခင်အဖြစ်ဝန်ခံ အသက်မရှင်ရင် ကယ်တင်ခြင်းမရဘူး”လို့ ဟောထားတယ်။ တကယ် စဉ်းစားကြည့်တော့ သခင်အဖြစ် ဝန်ခံအသက်မရှင်နိုင်တာ တွေ့လာရတယ်။ အဲဒီတရားသာ မှန်ရင် ငါတော့ ကယ်တင်ခြင်းမရသေးဘူးလို့ ဆင်ခြင်မိလာတယ်။ ဒါကြောင့် နောက်တခါ ဆက်ကပ်ဖို့ လိုလာပြန်တယ်။
သခင်အဖြစ်ဝန်ခံမှ ကယ်တင်ခြင်းရောက်မယ် ဆိုတဲ့ သွန်သင်ချက်ဟာ ယုံကြည်သူတွေကို ကမောက်ကမဖြစ်စေ၊ ရှုပ်ထွေးစေတယ်။ ကယ်တင်ခြင်းကို သံသယဝင်လာစေတယ်။ ကျမ်းစာက- တခုတည်းသော လမ်းကတော့ သခင်ယေရှုကို ကိုးစားခြင်းလို့ ဆိုတယ်။ ယော ၃း၁၈ မှာ အုပ်စု ၂စု ခွဲထားတယ်။ “သားတော်ကို ယုံကြည်သောသူသည် အပြစ်စီရင်ခြင်းကိုမခံရ။ မယုံကြည်သောသူမူကား၊ ဘုရားသခင်၌ တပါးတည်းသော သားတော်ကို မယုံကြည်သောကြောင့် ယခုပင် အပြစ်စီရင်ခြင်းကိုခံရ၏။” အပြစ်စီရင်ခံရသူဟာ အဖမ်းခံရ၊ အစစ်ခံရ၊ အပြစ်တွေ့ပြီးလို့ စီရင်ချက်ချပြီးသူဖြစ်ပါတယ်။ သမ္မာကျမ်းစာက ယေရှုခရစ်ကို ကိုးစားသူဟာ အပြစ်စီရင်ခြင်းကိုမခံရ။ စီရင်ချက်အောက်မှာ မရှိဘူး။ ယေရှုခရစ်ကို မကိုးစားသူကတော့ အပြစ်စီရင်ခြင်းကို ခံရပြီ။ ဘာကြောင့်လဲ။ “ဘုရားသခင်၌ တပါးတည်းသောသားတော်ကို မယုံကြည်သောကြောင့်” ပါ။ သူဟာ ကယ်တင်ခြင်းရဖို့ ယေရှုခရစ်ကို အပြည့်အဝ မကိုးစားဘူး။
မိတ်ဆွေဟာ ယေရှုခရစ်ထက် အခြားအရာတခုခုကို ကိုးစားခဲ့သူဖြစ်နေခဲ့ရင်၊ ကယ်တင်ခြင်းအတွက် ယေရှုခရစ်ကို ယနေ့ပင် ကိုးစားပါလို့ တိုက်တွန်းပါရစေ။
Posted by Papa at 1:38 AM
Labels: Dr. Curtis Hutson, တရား
Lordship Salvation? A Perversion of the Gospel By ...
I.Q Test Questions for children ညဏ်စမ်းမေးခွန်းမျာ...